Seensa Sirnoota dabran keessa magaaloonni xiyyeefannaa arkachaa waan hin turiniif rakkoon magaala teenyaa akkuma magaaloota
biro baay’ee xaxamtuu fi tan hidda gadifageefateedha. Rakkoolee baay’ee barabaraan dabalaa dhufte tana hiikuuf mootummaan biyya keenyaa Imaammataa fi Tarsiimoo misooma magaala baafate hojitti hiikuudhaan lafa qabatu seerootaa fi hojimaata haaraya sadarkaa sadarkaan jiru qopheessuu fi humna raawwachisummaa isaa cimsuuf tattaaffiin taasifama jira tattaaffii kanaaniis bu’aan gaariin gal’maa’u Jalqabee jira. Kanaafuu raawwii bara 2002 dabranii qorachuudhaan leenjii tarsiimoo muuxannoo gaggaarii babal’isuu irraa argamanii fi waltajii marii adda addaa sadarkaa wirtuutti gaggeefaman irratti yaada ummataa ka’an akka ka’oomsatti fudhachuun karoora Ji’oota jahan dhuufanii kan qophaa’ee jira. Karoora kana keessatti kaayyoo, galma, hojiiwwan Ijoo fi gurguddoo fi kallatti raawwii kaayyame jira.
Kutaa 1 2- Haala Waliigalaa 2.1 Hundeeffama Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa
Magaalaan Awwadaay Finfinnee irraa km 500 Godina Harargee Bahaa Aanaa Haramaaya keessatti argatii Haalii qileensa isii badda daree yemmuu tahu baayinni ummataa dhiira 12143 dhalaa 11527 waliigala 23,670 akka tahe ni tilmaamama. Manni Qopheessa magaalaa Awwadaay kan dhaabate bara 1991 hoggaa tahu saniin dura akka araddaa maqaa tokkotti Awwadaay 03 jechuun mana Qopheessaa magaalaa Haramaaya jalatti bulaa turte bara 1996 tti Labsii 65/95/magaalaoota naannoo Oromiyaa bifa haaraan ijaaraman magaaloota 20 marsaa duraa caaseefama fi hojmaata fooyya’een hojii Bulchiinsa gaariifi hirmaanna ummata mirkaneessuun misooma arifachiisaa fiduuf dhaabatan keessaa sadarkaa 4A kanameefi ofiin of bulchuu jalqabde magaaloota naannoo Oromiyaa keessatti argaman 376 keessaa magaaloota diigdaman marraa duraatiif riifoormii keessa galan keessaa takkaa tahu isii xiyyeefannaa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa tahaaf kanne kan agarsiisuu dha. Qorannoon Topogiraafi Magaala kan gaggeefame bara 1993 keessa hoggaa tahu bara 1995 keessaa maastarpilaaniin magaalaa hojjatameefi bara 1996 keesa hojiira ooluu eegale balinni lafaa maastar pilaaniin ammatame heektara 394 taha. Magaalaan Awwadaay daldalaasssss sa’aa 24 tiin tan beekamtu hoggaataatu magaalaa seena qabeessa fi daldalaan beekamtuu taatee Hararii fi Dirreedhawaa jiddutti Daandii guddaa kan walqunnamtu waan taateef sochii investimantiitiif mijooytuudha.
Mootummaan naannoo Oromiyaatiifi Biiroon hojii fi misooma magaalaa Oromiyaa sochii magaalaa tana ilaaluun Amajii bara 1999 irraa eegale magaala 2ffaa Bttii akka guddatu taasisanii jiran. Sochii daldalaa sa’aa 24 magaalaa tana keessaatti gaggeefamuura kan ka’ee guyyaatti namooni 5000 olii magaalaa tanaa seenanii kan bahaan hogaa ta’uu konkolatoonii bayeeniis magaalaa tana seenaniitti bahan. Rakkoolee gurguddoo magaalaan tun qabduu keessaa :Daldaala jimaattiin walqabatee kosiin garabaa tonii 2 hanga 3 tahuu guyyatti magaalaa kan seenuu tahu. Waggootaa dheeraadhaaf xiyyeefanaa dhabuu irraa kan ka’ee hanqinaa bu’uura misoomaaf tajaajilaa hawaasumaa kana qabu ta’u. Sababaa hojii barbadattiin namooni bayeen gara magaalaa wan seenaaniif hojii dhabdumaan babalachuu. Iddoowwan daldalaa adda addaa babaalaachuu dhabuu irraa kana ka’ee dandii gudaa rratti daldaalii babaalchuu. 2.2 Gurmaa’insaa fi Caaseeffama Humna namaa Waajjiraa Caasaan Bulchinsa Magaalaa kantiibaa fi koree kaantiibaatiin kan hogganaman waajjiroota mootummaa adda addaa fi Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa akkasuma of keessaa kan qabdu hoggaa tahu. Muddee bara 2001 keessaa Bulchiinsa Araddaa lamatti caasaan isaa hayyamamee dha. Kun rakkoo magaalaa keessa hanga tokko furuu danda’ee jira. Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa dabalatee adeemsa hojii qoratame, Adeemsa hojii Deeggarsa Bulchinsa Qabeenyaa Humna Namaa, Adeemsa hojii ijoo Misooma Dabarsaa Bulchinsa Manneenii, Adeemsa Hojii Kenna Tajaajila fi Ragaa Hawaasummaa Adeemsa Hojii ijoo Qulqullinaa fi Magariisuu magaalaa, Adeemsa Hojii Bu’ura Misoomaa Dizaayinii fi Ijaarsaa kan jiran hoggaa tahu. Kutaan Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa fi Kutaan Tajaajila Diinagdee JBAHn kan hin qoratamne yammuu tahu adeemsi Hojii Gurmaa’insaa fi Deeggarsa Bu’ura Magaalotaa fi Adeemsii Hojii Qophii karooraa, Hordoffiifi gamaaggama raawwii qorannoon JBAH irratti gaggeeffamtullee caasaa nuuf
ergamerratti lakkoofsi eenyummaa gita hojii kennameefi nuuf hin ergamne. Garuu adeemsa hojii gurmaa’insaa fi Deeggarsa bu’ura magaalota jalatti waamamaa gita hojii Raawwataa Hojjii Qorannoo Dhimma piroofaayilaa Bulchinsa Magaalotaa fi Raawwataa Hojii Dhimma Walitti hidhaminsa Magaalaa fi Baadiyyaa lakkoofsa eenyummaa gita hojii qajeelcha tajaajila mana qopheessaa jalatti kaayyameeti jira. Adeemsa Hojii Qophii Karooraa hordoffii fi gamaaggamaa raawwii TMG hojiirra oolchuu fi galma gahumsa karooraa keenyaatiin barbaachisaa tahullee caasaa nuuf ergamerratti waamamaan gita hojii kennameefi waan hin dhuminiif biiroo hojii fi misooma magaalaa oromiyaa gaafachuun humni namaa lama karaa Waajjira SSO tiin mirkanaa’ee akka nuuf ergamu kan gaafatamu tahu. Kana malees Adeemsa hojii Qulqullinaa fi Magariisuu Magaalaa jalatti Raawwataan Eegumsa Magaalaa, Raawwataa Dizaayinii qulqullinaa fi Magariisuu Magaalaa, Raawwataa Qulqullina Magaalaa Adeemsa kana jalatti kan qoratame tahullee beeksisa gita hojjattootaa mootummaa KSSO irraa nuuf ergame irratti lakkoofsa eenyummaa gita hojii kennameefii waan nuuf hin ergaminiif jecha haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin gitni hojii kun waan nu barbaachisuuf gaaffii biiroof dhiheessuudhaan kan gaafatamu taha.
Gabatee Humna namaa Qaj/Taj/M/Qopheessaa agarsiisu
Maqaa kutaa hojii
Baay’ina namaa jiruu
humna Baay’ina ture Dhi 4 2
human Karoora bara 2003
Baay’ina humna namaa Ibsa
Caasaan namaa bara 2002 humna namaa bara 2003 ramadamee Dha 3 2 w/g 7 4
Mana Qopheessaa Adeemsa hojii kenna 8 Tajaajilaa fi Ragaa hojii 17 fi hojii 10 Qabeenya hojii 13 Ijaarsa Hawaasummaa Adeemsa qulqullinaa magariisuu Adeemsa Bulchinsa humna nama Adeemsa Dizaayini fi
Bu’uura misooma. Adeemsa hojii Ijoo 8 Misooma dabarsaa fi Bulchinsa manneeni Adeemsa hojii Qophi 5 karooraa fi Gamaa 68
ggama Raawwii Ida’ama
2.3 Gosa Tajaajila Qajeelcha Tajaajila Mana Qopheessaa kennu Akkaataa labsii 65/95 keewwata 2 (8) jalatti akkuma ibsametti tajaajila Mana Qopheessaa jechuun tajaajila bishaanii fi dhangala’aa, ijaarsaa fi suphaa daandii, ittisa balaa ibiddaa fi balaa tasaa, hojiiwwan galmee kabajaa misoomaa fi bulchinsa lafa magaalaa, qulqullinaa fi miidhaginsa magaalaa, tajaajila idilee jiraattotaaf kennamaniifi tajaajila biro bulchinsa magaalaatiin murteessu akka dabalatu kaa’eeti jira. Kana maleesa akkaatuma labsii kanaatiin keewwata 9 hojiiwwan bulchinsa magaalaa jalatti kaa’aman kan hammatu yammuu tahu hojii lafaa fi eegumsa naannoo
akkasumas hojiin invastimantii xiyyeeffannaa mootummaan kennee fi sadarkaa waajjiraatti kan hundeeffaman waan ta’eef gara isaaniitiin kan hojjataman taha.
3. Tarreeffama Haalaa 3.1 Tarreeffama Haala Keessaa
Lakk Qabxiilee tarreeffamaaf Cimina filataman 1 Bulchiinsaa /Hooggansa Koreen Mgt Waajjirichaa dhaabbate A. toofta hooggansaa Jiraachuu B. Turtii aangoo C. Mul’ata
Dadhabina A. Hoggansi Waajjira (Sektaraa) (Koreen Magt cimuudhabuu - Hoggansa Keessatti hirmaachisummaan hin Mul’anna - Ragaan manaa, Lafaa fi Ragaan bu’uraa qindooma jiraachuu dhabuu. Mul’ata Waajjirichaa irratti hojjattootni qixa barbaadameen wal qixa hubatamuu dhabuu - Akkaataa JBAHn qoratameen taasaa Caasaa magaalaa - Dhufe kan wal hin simule ta’uu - Adeemsi JBAHn qoratame caasaan dhufuu dhabuu - Caasaan jiru ergama waajjirichaa kan hin kaayamne ta’uu - Karoora tarsimootiin
Waajjirri Mul’ata qabaachuu isaa
Hoggansa Hojii A. Caaseffama dhaabaa B. Karoora tarsimootiin hogganamuu C. Adeemsa hojiitiifi Sirna hojmaataa - Qophii karooraa - Sirna hordoffiifi gamaaggamaa - Dhiheesa gabaasaa - Sirna gurmaainsa
- Caasaan Adeemsotni hojii hunda Qoratamee dhufuu - Karoori tarsimoo qophaawwu. - Karoorri Waggaa bahuu. - Akka waajjiraatti yeroo eegatee gabaasni qophaawa. - Qophiin karoora Fooyyeen Adeemsota birtti ni mul’ata - Sirni Hordoffii fi gamaggamaa Jalqabuuf kaka’umsi ijiraachuu - Odeeffannoon gurmaa’uu baatu
illee jiraachuu. - Deeskiin Odeeffannoo ijaaramee hojjataan ramadamuu.
Humna Namaa A. Dandeettii hojjataa B. Kuufama humna nama baratee
hoogganamuu dhabuu - Dandeetti karoorsuu irratti gdihumsi jiru xiqqaachuu - Karoorri bahu hirmaachisummaa dhabuu. - Karoora bu’aa irraatti xiyyeeffate bahuu dhabuu. - Hoggansi jiru karooraaf xiyyeeffannaa dhabuu - Haala qabatamaa irratti kan hinciyyeeffanne - Hordoffi fi Gamaaggami Karooraa hanqina qabaachuu. - Sirni namni hojjate itti badhaafamu jiraachuu irratti hanqina jiraachuu dhabuu . - Sirni gurmaa’insa odeeffaannoo haala qabamee waajjiraatiin keessatti gurmaa’uu hanqina qabaachuu - Sirni Odeeffannoo diriiruu dhabu - Humna namaa barataa -hojjataan hundi hojii irratti akkaataa guutachuu irratti fooyyeen gaariin JBAHn Gahumsa barbaadame jiraachuu hubannoo gahaa qabaachuu dhabuu - Haalli Naannoo hojii hanga - Labsii, Danbii, Paakeejii dhimmoota
C. Duudhaa, dandeettii fi haala aadaa D. Naannoo hojii E. Humna Namaa F. Gamaaggama Raawwii hojii G. Hooggansa hojjatotaa H. Mindaa fi Faayidaa adda addaa I. Hojjataan haala mana jireenyaa isaa itti hin gad dhiifne
tokko mijaawaa ta’uu - Mirgaa fi faayidaa hojjataa kabajuu irratti fooyyeenii fi jalqabbiin jiraachuu
magaalaa irratti hubannoo dhabuu - Kaka’umsi fi danta dhabummaan hojjattoota muraasa biratti mul’achuu -Ilaalchi tajaajilummaa hawaasaa hin dagaagne - Iddoo bashannanaa haragalfi - Jiraachuu dhabuu Haalli mijaawaan fasilitin jiraachuun - Madaalliin hojii wayitaawwaa fi bu’aa irratti xiyyeeffate Jiraachuu dhabuu. Hordoffiin itti fufinsa qabu jiraachuu. dhabuu ara - Bu’aan adda addaa Seeraatiin kennamu gahaa tahuu dhabuu
Faaynsii A. Hooggansa bajataa fi to’annaa B. Itti fayyadaminsa, bajataa C. Bajatni haala gahaa taheen ramadamuu D. Gammaaggamaa fi Hordoffii
- Haasaan jiraachuudha bullee humnuma qabnu duguugnee to’achaa turuu - Gara hudaan waldanda’uun baajata mana qopheessa waajjiraalee birootiin gargaaruu itti fayyadamuu Baajata qabaachuu isaatiin - Gamaaggamni fi Hordoffin baajaataa jiraachuu
4 5 Meeshaalee itti fayyadama A. Tajaajila Wajjiraa B. Meeshaalee itti fayyadaminsaa
- Labsii, Danbii, Qajeelfamnif sirna hojimaataa baajata irratti ifa tahe jirachuu dhabuu - Itti Gaafataman adda bahe fi dhummaa MMD, Mana Qopheessaa fi Waajjira Galii Jiraachuu dhabuu - Itti Fayyadamni Karooraafi Raawwii bajataa karaa iftoomina qabuun kan hin diriirre ta’uu. - Sadarkaa Adeemseetti karoora baajata kan mata fi Qopheeffachuuf kaka’umsa dhabuu - Ramaddiin baajataa haala Hojjatamuu walin gahaa tahuu dhabuu - Gamaaggamaa fi hordoffiin ifa tahe jiraachuu dhabuu.
Iddoon Teesumaa Adeemsota hojii - Akkataa JBAHn Adeemsota tiif mijaawullee teessuma fi Minjaalii hojii Gurmessun fi iddoo hir’achuu:mijjeessuun fooyyeen jiraachuu - Hanqina
C. Konkolaataa D. Meeshaalee Qunnamtii
- Konkolaataa kosii goggogaa kaasu qabachuu
- GIS - Total Station - Minjaala - Type (Taaypii) - Konkolaataa - Motar Cyci - Makinaa Sagaraa xuuxu - Makinaa qeyra foon guru - Makinaa qushaasha goggoga kaasu - Ambulanci - Ittisa bala ibiddaa - Maashinari karaa hojjatan jiraachuu dhabuu Meeshaalee Qunnamti - Bilbila - Faaksii - LAN - Website - Footoo Koopii - Pilootara - Piroojektara
Hanqina meeshaa sab-qunamtii jirachuu
Kennaa tajaajilaa A. Itti quufinsa tajaajilamtootaa B. Haala gaariin bu’a qabeessa tahuu C. Haala komii keessumeessuu D. Uumama wantoota haarawaa Itti fufinsa /Sabatinsa dhaabbaticha A. Kutattummaa B. yaada tarsimo’aa C. Qunnamtii qama biraa wajjin - Fayyadamaa Wajjin - Biroo Naannoo fi jiddugalaa wajjin - Biroolee godinaa fi aanaa wajji - Dhaabbiilee gargaarsaa wajjin kanneen biro D. Argamiinsa galii fi qusannaa baasii
- Kennaa Tajaajilaa irratti Jalqabbiin gahaan jiraachuu - Deeskii Odeeffaannoo Sanduuqni Yaadaa fi Komii Keesummeessuun dhaabbachuu
Danbii fi Qajeelfamoota jiran ilaalchisee hubannoon Raawwii irratti jiraachuu. Humna namaa qabmuun hojii keessa galn dhabuu
- Kutannoon jiraachus - Ilaalchi Tarsimawaan hanga tokko jiraachuu - Walqunnamtiin karaa adda addaa tiin godham fooyya’aa ta’uu - Tajaajilamaan keenya bifa gaariidhaan tajaajilli isaa fooyya’u - Biroo Misooma magaalaa fi Oromiyaa Waajjira misooma magaalaa Godinaatii waliin walqunnamtiin jiraachuu - Sektaroota magaalaa waliin wal qunnamtii gaariin jiraachuu
- Kutannoo fi fedhiin jiraatullee itti fufinsa qabaachuu dhabu - Ilaalchi Tarsimowaan xiqqaa ta’uu . - Tal – qunnamtiin dhaabbilee miti-mootummaatiin Waliin kan hin qabne.
3.2 Tarreeffama Haala Alaa
Qabxiilee Fooinsaa Haala Mijjaawaa Siyaasaa - Poliisii motummaa - Misoomni magaalaa - Labsii, Seerota fi xiyyeeffannoo Mootummaa qajeelfamoota argachuu - Fooyyainsa sivil sarvisi - Sirna Al-Waaltainsaa Caaseffama Naannoo fi hojiirra Oolchuu godinaa - Paakeejiin Bulchinsa - Sirna Alwaltainsaa gaarii akka Oromiyaatti - Haala Siiyaasaa godinaa bahee jiraachuu ykn aanaa keessa jiruun - Magaalaa ofin of bulchuu - Huji dhabdummaa xiqqeessuuf mootummaan xiyyeeffanna kenu
Sodaa - Haalli Maxantummaa Jiraachuu - Misooma magaalaa irratti jiddu seenummaan jirulchuu - Ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaan fii fudhatamtu irratti jiraachuu dhabuu. FKN . Lakk 26/91 irraatti aangoon - Bulchinsa magaalaa mana seeraan alaa diguuf kename addaan baasee kan hin keenye - Beenyaan walaqabatee haala qabatamaa magaalaa teenyaa walin labsiin manuwaalii ifa tahe jirachuu dhabuu Fkn. Jimaa - Lasii dandiifi Qajeelfamoota ijiran irratti manni murtii dhabbachu dhabuu - Qoodni hojii kan Waajjira lafaa fi kunuunsaa Naannoo fi Adeemsa Hojii kenna - Lafaafi Raawwi Ijaarsaa
Siyaasaa -Imaammata Mootumna
- Paakeejiin Bulchinsa gaarii bahee jiraachuu -Mana marii mata ofii qabaachuu - Tarsimoo Muuxannoo Gaarii
babbalisa jiraachuu - SFSS fi JBAHn hojiirra Ooluuisaa -JBAHn qoratamee gad bu’uu isaa Magaalaan ofiin of bulchuu isii Mootummaan Ijaarsa dandeetitif xiyyeeffanaa kennuu
Siyaasaa - Gara immata Mootummaati - Labsii Mootummaa ilaalchise - Caaseffama Araddaatiin
- Naannoo daangaa magaalaa fi Aanaatti qajeelfamootni ifa tahan jiraachuu dhabu - Labsii fi Qajeelfamoonni Bulchinsa lafa magaalaa ilaalchisee jirachuu dhabuu - Labsii Galmeessa (Mana fi Seera qabsiisuu irratti jiraachuu dha (Hojii Regularaayzeshinni) - Suphaafi bitaa meeshaa irratti qaama biroof dabarsee kennuun itti gaafatamuumaa keeyuudhab - Danbii fi Qajeelfamni raawwi waa’ee suphaa konkolaata fi Bittaa meeshaa jiraachuu dhabuu - Akkaataa itti fayyadama Qabeenya Ummamaa magaalotaa fi Aanota Naannoo jidduu jiru irratti Danbii, Qajeelfamoonnifi ifa ta’e jiraachuu dhabuu
Dingdee - Sirna gaba walabaa - Karaa guddina dinagdee - Karaa mulliftuu guddinaa (GOP) - Karaa humna galii jiraataa - Sirna dabala Addunya - Fooyyainsa sogantaa gibiraa - Baballina bu’uraalee misoomaa
- Xiyyeeffannaa IMXf kannuu isaa - Potenshiyaali warshaa qoratamaa jiraachuu isaa - Bu’uraaleen misoomaa birtti fooyyeen hanga tokko jalqabbiin jiraachuu - Magaalaan galii ofii guddiffachuuf aangoo qabaachuu - Fedhiin investimantiif qabnu jiraachuu. - Galiin JBAHn qoratamuu - Daldala Jimaatiin wal qabatee carraan hojii jirachuu
- Galii bunaa kufuu - Dhiibbaa Giloobaalayizeeshinii - Sochiin daldala Jimaa iratti hirmaannaan jiraattootaa xiqqaachuu - Sochii daldala jimaa irratti haala qabatamaa magaalaa teenyaa jimaa irratti labsii, danbiifi qajeelfamootni Ifa tahe jiraachuu dhabuu. - Sochii daldala Walfakkaatu irratti hirmaachuun galin haa’aasaa magaalaa teenyaa xiqqaachuu - Haala qabatamaa magaalaa teenyaa tin mata dureewwan gali qoratamanii jiraachuu dhabu - Magaalaan Jimaa gara Nannoo bira deemuu (hanna , Saamicha) - Sochiin daldala Jimaa (gatiin ) Jimaa kufuu danda’a
JBAHn gali qoratamuu
Hawaasummaa - Dabalinsa ummataa - Amaatii, ilaalcha fi hawaasummaa - Dhiheessa hawaasummaa
lakkofsa Duudhaa argama Tajaajila
- Baballinsa Dhaabbiilee hawaasaatiif xiyyeeffannoo kannuu isaa - Gurmaainsi hawaasaa jiraachuu isaa - Waltajjiin Afooshaa ji’aan jiraachuu - Humni namaa Jiraachuu
Gibirri Lafaa fi manaa Sadarkaa 2ffaa A tiin kafaluun ulfaachuu. - Guddina dingdee Baadiya Naannoo keenyaa haala gaariin keessummeessuu hin dandeenye - Hanga magaalaan barbaaddu bu’uraaleen Misoomaafi Tajaajilli gahaan jiraachuu dhabuu - Iddoon daldalaa mijaawaa Jiraachuu dhabuu - JBAH qoratame kutannoon lafa qabsisuu dhabuu (gali) - Dagaaguudhabuu Aadaa hojii - Baballinsa dhukkuba HIV/AIDS - Ijaarsi seeraan alaa namoota Naanno biro irraa dhufaniin pilaana magaalaan wal faalleessuu heddummaachuu. - Namoonni Magaalaa fi baadiyyaa Naannoo irraa gara magaalaa hatan
Hojjataan haala mijaawaa jiru irraa kan ka’ee yoo gadi=dhiisuu dhabuun yeroo tokko tokko ni mul’ata Gamaaggamni Raawwii akka waajjiraati jiraachuu
Teeknoolojawaa - Guddina qunnamtii teeknoloojii - Tajaajila waliin gahuu - Hojmaata haarawa
-Mootummaa naannooti babbalinsa odeeffannoo teeknoolojiitiif xiyyeeffanaa kannuu isaa - Waajjiri qunnamtiif xiyyeeffannoo itti kennuu isaa
heddummaachuun tajaajilli hawaasaa keennamu xiqqaachuu - Hirmaannaan ummataa xiqqaachuu - Tajaajilli fayyaa Maati gahaan jiraachuu dhabuu (deessistuu, Ekestenshinii fayyaa ,etc) - Aadaan lafa babal’isanii qabachuun jiraachuu. - Aadaan qulqullina Naannoo ofii eeguu jiraachuu dhabun - Sababa Muudamaatiin yeroo tokko tokko hojjattootni hojii gad lakkisuu. - Gamaaggamni akka adeemsootaatti itti fufinsa dhabuu wal irraa citii mul’achuu irraa kan ka’e hanqinni jiraachuu - Hawaasa baadiyyaatiif Odeeffannoo teeknooloojii baballisuuf faaynaansiin ga’aan jiraachuu dhabu - Akka waajjiraatti
hordofuu irratti - Karaa biraatiin
Naannummaa - Kuufaminsa Qabeenya uumama naannooti argaman - Goginsaa fi qa’uumaminsa balaa Uumamaa - Haala teessuma lafaa
- Kaka’umsi jiraachuu Tajaajila waliin gahuu keessatti (Kompitara) interneetii) - Hjimaataa Haarawa hordofuu irratti jalqabbiin jiraachuu fkn - Carraan jiru magaalaan teenya Jimaan wal qabatee haala saarii irra jiraachu - Manni Poostaa babal’achuu Tajaajilli Mobayilii baballachuu - Humna Namaa gahaan Jiraachuu - Magaaloonni karaa dhiheessa bu’uraalee misoomaatiin humna fooyya’aa qabaachuu - Daldalaaf magaalaan teenya mijaawaa ta’uu - Qabeenyi Uumamaa daandin hojjatan korataa fi cirrachi jiraachuun - Babal’ina guddina magaalaaf mijjoytuu ta’uu. - Qutee bulaan potenshaalii waabituu qabaachuu - Daandiin Dirree Dawaa fi Harar Jiddu jiraachuu
qunnamtiin teeknolojii jiraachuu dhabuu (Teknolojii lafa) - ICTn dadhabaa ta’uu - Ogeessa suphaa gara ICT tiin dhaabamuu - Baballinsa Faalama Naannoo - Lafti bal’oon qoteebulaan qabamu - Naannoo tokko tokko Zooniilee Keessatti galaanni jiraachu - Oomishni Jimaa Caamsaan Wajjiin Xiqqachuu. - Naannoo tokko tokko keessatti Manneen Walitti tuucha’aniifi Manneen Jooniyaa Hedduummachuu (Slum Area) baballachuu. - Qulqullinaan wal qabee decomposiin hawaasni hubannoo dhabun.
3.3 Gamaaggama karoora fi Raawwii bara 2002 Tarreeffama Hojii Idilee a. Hojii Ijoo Hoggansaa Hojii kana jalattii hojiiwwan TMGB fi hojiiwwan ijoo hoggansaa, qophii karooraa, sirna hordoffii fi to’annoo akkasumas hojiiwwan JBAH hojiirra oolchuufi SFSS irratti xiyyeeffachuun raayyaa misoomaa uumuu ilaalchisee hojiileen adda addaa kan hojjatame yammuu tahu garanaan bara 2002 keessa Ji’a Adoolessaa bara 2001 irraa jalqabee leenjiiwwan adda addaa kennuudhaan rakkoolee karaa ilaalchaa, dandeettii fi hooggansaatiin jiru furuudhaaf sochiin taasifameeti jira. Kana malees hojiileen kun karoora keessatti akka qabamu taasisuurraa jalqabee leenjiiwwan kennaman irraa ka’uun karoorri bara 2002 Ji’a Onkoloolessaa keessa bifa haarayaan akka qophaawu kan taasifame hoggaa tahu karoorri qophaawe kunis koree walii galaatiin, koree dhaabbiitiin, mana marii magaalaatiin gamaaggamamee akka mirkanaa’u godhameeti jira. Haata’uu malee karoora hojii misoomaa fi bulchinsa gaarii baasuu fi hojjiirra oolchuu irratti rakkoon TMG hojiirra oolchuu tiin akka qabnu saaxil bahan rakkoon ilaalchaa hoggansaa hiikkamuu qaban hanga barbaadame hin hiikkamne. Kanaafuu karoora bara dhufuu keessatti rakkoo karaa ilaalchaa fi hooggansaa tiin jiru irratti xiyyeeffatamee hojjachuun barbaachisaadha. Karaa Raayyaa misoomaa gurmaa’e uumuutiin ilaalcha misoomawaa irratti ilaalcha cimaa gamtoomee uumamuu dhabuurraa kan ka’e tokkummaan raawwii cimaan uumamuu hin dandeenye. Kanarraa ka’uun ilaalchi misoomawaa gamtaawe Qajeelcha keessatti uumamuu hin dandeenye. Rakkoon dandeettii akka qabnu kan lafa kaayyame ta’u illee rakkoo dandeettii addaan baasanii kaa’uudhaan rakkoo dandeettii kana hiikuuf hojiilee hojjatamuu qaban irratti xiyyeeffatamee hanga barbaadame hin hojjatamne. Sababni guddaan ilaalcha misoomaa fi dimookiraasummaa keenyaa doomsaa jiru gufachiisaa jiru karaa adda addaatiin kan ibsamuu fi kan mul’atu ilaalcha kiraa sassaabummaati. Kunis fedhii dhunfaa irraa eegalee ilaalcha boodatti hafaa hawwaasa keessa jiruufi maxxantoota adda addaatirraa summiin kiraa sassaabdummaa facaatu ittisuu kan danda’u ilaalchi misoomawaa fi raawwii gamtoome akka hin qabaanne nu taasiseeti jira. Kana irraa ka’uun rakkooleen ilaalchaa, dhiphummaa fi gad
aantummaa, olola maxxantootaa ittisuu dhabuu, hanqinoota keenya dhageeffachuuf qophaawoo ta’uu dhabuufi bu’aalee xixiqqaa argamiif gammaduu fi fedhii maxxantummaa ofiitiif guuttachuuf jilbiiffachuu qulqullina siyaassaa dhabuu hundeerraa hiikkamuu hin dandeenye. Kanaafuu dhimmoota kana irratti xiyyeeffachuun sochii Tarsimoo Muuxannoo gaggaarii hojiirra oolchuu cimsuudhaan hojiirratti rakkoolee ilaalchaa fi dandeettii deeggarsaa fi hordoffii cimtuu godhuudhaan kan itti deemamu ta’a Karaa JBAH tiinis adeemsa hojii tokko tokko keessatti chaartarii qopheeffachuun kallatti mauwaalii qofaan hojjachuun raawwii hojii guyya guyyaan madaalaa deemuun istaandaardii hojii guutanii madaalaa deemuun kan mul’ate ta’ullee hanga barbaadamuu deemuu hin dandeenye. Kunis bara dhufu keessa kan itti xiyyeeffatamu taha. Karaa qophii karooraa, gabaasaa, hojii hoggansaa fi hordooffiitiin waggoota dabran irra haalli fooyyeen kan jiru tahullee karoora sirrii baafatanii raawwataa qabsiisanii hawaasaa fi miseensa bal’aa hiriirsuun hojii keessa galchuun hin danda’amne. Karaa biraatiin waltajjii idilee kabajamuu dhabuu fi raawwi hojii madaaluudhaan sirna hojimaataa tokko tokkoon namaa bu’aa galmeesseen itti madaalamuufi ittiin addaan baafamaa deemu irra gahuu hin dandeenye. Kanarraa ka’uun abboottii adeemsaatifi raawwattoota biratti laafinni mul’achaati jira. Karoora tarsimoo muuxannoo gaggaarii karaa qulqulluu ta’een ciminaan hojiirra ooluu kan danda’u raayyaan misoomaa gurmaa’ee kan jiraatu yoo ta’e qofa. Kanumaafuu bara 2003 keessa tarsimoo kana hojiirra oolchuuf sochii oowwaa gaggeessuudhaan rakkoo ilaalchaa furaa deemuun ilaalchi misoomaa gabbachaa akka deemu godhuu daran qabsoo wal irraa hin cinne gaggeessuun ilaalcha kiraa sassaabdummaa sochii oowwaa kanaan baqaa akka deemu godhuun dhimma xiyyeeffannoon itti kennamuudha.
b. Paakeejii Bulchinsa Gaarii Paakeejii kana keessatti akkaataa Caamsaa bara 2001 keessa fooyyee dhiyaateen Sagantaan duraan torba ture gara sadiitti walitti cunfamanii dhiyaataniiti jiran haaluma kanaan 1. Sagantaa fooya’insa sirna misooma lafaafi pilaani 2. Sagantaa fooyya’insa sirna taaksii fi faayinaansii 3. sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee 1. Sagantaa fooyya’insa sirna misooma lafaa fi pilaanii Karaa dhiheessa lafaatiin bara baajataa 2002 ilaalchisee Bara 2002 keessa lafa mana jireenyaaf m220,000 investimantiif m212,000 lafa IMX m22572, tajaajila hawaasu Haata’uu malee karaa bulchinsaa fi misooma lafaatiin hojiin hanga barbaadamu hojjatamuu dhabuurraa kan ka’e jiraattota magaalaa biratti komiin bal’aan kan mul’atuudha. Itti fayyadamaa fi dhiheessi lafaa karaa ifa tahee fi qindoomina qabuun sirni hojimaataa sirrii diriiree jiraachuu dhabuurraa kan ka’e lafti magaalaa muraasa ta’e kun saamichaa fi israafummaa dhaaf saaxilameeti jira. Sirni abbootii qabeenyaatiif beenyaa haqa qabeessa ta’e itti kaffalamuu nama dandeessisu sirni hojimaataa ifa ta’ee fi murtaawaa ta’e hin jiru labsii fi qajeelfamni beenyaa jiraatullee hojimaatni murtaawaa fi ifa ta’e diriiruu dhabuurraa kan ka’e sirn ihojimaataa kun bu’a qabeessa ta’uu hin dandeenye iddoowwan ammaan dura kennamaniis bu’ura misoomaa dursee waan hin guutaminiif komiin hawaasaa bal’inaan ka’aati ture ammallee ka’aati jira. Karaa biraatiin Filannoo bara 2002 tiin walqabatee qabiyyee seeraan alaa ittisuu fi sirreessuuf xiyyeeffannoon kennamuuf xiqqaa ta’uu irraa kan ka’e ijaarsi seeraan alaatiifi saamichi lafaa baballachaati ture. Bulchinsi Magaalaa lafa qorannaa irratti hundaa’uun beenyaa kafalee qopheessee sirna liiziitiin kannuu waan hin dandeenyeef lafarraa galii argachuu qabu argachuu hin dandeenye. Kanaafuu bara baajataa 2002 keessa rakkooleen gararreerratti eeramaniifi kanneen biroo Waajjirri Lafaa fi Kunuunsa Naannoo dhaabbatee waan jiruuf rakkooleen kun hiikkamanii bu’aan gaariin kan galmaawu taha.
2. Sagantaa fooyya’insa sirna taaksii fi faayinaansii Bara 2002 keessa Karaa galii mana qopheessaatiin karoora gad kan sassaabame ta’ullee galii bara 2001 tii ol qarshii 1,000,000 (miliyoona tokkoo ol) caalmayaan sassaabameeti jira. Bara 2001 keessa galii man qopheessaa qarshii 3,500,000 guuruuf karoorfamee qarshiin 4,788,365.08 galii yammuu tahu bara 2002 keessa immoo qarshii 6,100,000 karoorfamee qarshii 5,778,064.66 galiii taheeti jira. Haata’uu malee galiiwwan adda addaa JBAHn qorataman duguuganii guuruu dhabuu haala qabatamaa magaalaatiin galii haarawa uummachaa deemuu dhabuu galii mana qopheessaatiif akka galii mootummaatti xiyyeeffannaa kennuu dhabuu, hojjattoota biratti ilaalchi galii mana qopheessaa sassaabuuf kennamu xiqqaa ta’uu fi galii muraasa qofarratti xiyyeeffatanii hojjachuun waajjira galiiwwanii biratti kan mul’ate yammuu tahu karaa mana qopheessaatinis ogeessonni galii sassaabuu qaban sassaabuu dhabuu ragaa galii sassaabuuf nama gargaaru qindeessanii waajjira galiiwwaniitiif kennuu dhabuu, karooraa fi raawwii galii irratti waajjira galiwwaniitiin wajjiin waltajjii idilee uummatanii gamaaggamaa deemuu dhabuun mul’ateeti jira. Karaa bulchinsaa fi to’annoo faayinaansiitiinis karoora waggaa qopheeffachuun koreelee adda addaatiin gamaaggamuun mana marii magalaatiif dhiheessanii mirkaneeffachuun kan jiru tahullee gahee hojii mana qopheessaa fi waajjira faayinaansii karaa ifa taheen beekkamuu dhabuu, qajeelfamaa fi danbiin ifa tahe jiraachuu dhabuu daran eega sochiin faayinaansii mana qopheessaa gara waajjira faayinaansiitti galee waggoota lama kan lakkoofsise tahullee leenjiin qaamni lachuu irratti argaman kannamuu dhabuurraa kan ka’e hubannoon walii wajjiinii uumamuu hin dandeenye. Karaa biraatiin sirni bittaa fi bulchinsa qabeenyaa magaalotaa ittiin gaggeeffamu danbii fi qajeelfamni ifa tahe jiraachuu dhabuu daran qorannoo JBAHtiinis ifatti kan kaa’ame hin jiru. Bara baajataa 2002 keessa meeshaalee qulqullina hin qabne bituu meeshaalee gaafatamanii ala bituu, meeshaalee gaafataman yeroon dhiheessuu dhabuu, caalbaasii bittaaf bahan irratti abbaa baajataa hirmaachisuu dhabuu fi gabaasa raawwii faayinaansii Ji’a Ji’aan akkasumas kurmaanaan kan hin gabaafamne tahuu daran gabaasni ooditii keessaatiis kurmaana kurmaanaan gabaafamuu dhabuun karaa waajjira MMDtiin kan mul’ate hoggaa tahu karaa mana qopheessaatiinis karoora bittaa ifa tahe gosaa fi meeshaalee bitamtu moodeelaan addaan baasanii dhiheeffachuu dhabuun mul’ateeti jira.
3.Sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee Karaa sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettiitiin manni marii magaalaa, qaamni haqaa (poolisii, abbaa alangaa, waajjira Bulchinsaa fi nageenyaa) akkasumas caasaa araddaa fi mana qopheessaa jiddutti muudamni hojii hanga barbaadame uumamuu dhabuu irraa kan ka’e olaantummaan seeraa kabajamee bulchinsi gaariin lafa qabachuu hin dandeenye. Karaa biraatiin humni raawwachiisummaa mana marii magaalaa fi araddaa cimsuuf leenjiin hubannoo uumuu kallattii karoorfameen hin raawwatamne. Koreen dhaabbii misooma magaalaa karooraa fi raawwii hojii qorachuudhaan bara 2001 irra haalli fooyyeen kan mul’ate tahullee raawwii hojii keessatti karaa deeggarsa kennuutiin sochiin taasifame xiqqaadha. Hirmaannaa ummataa cimsuuf sirni hirmaachisaa fi gurmaa’insi hawaasni irraa amantii qabu ijaaramuu dhabuu daran manuwaalii hirmaannaa ummataa qindeessuuf nama gargaaru bahee hojiirra ooluu dhabuurraa kan ka’e hirmaannaan ummataa hanga barbaadamu guddachuu hin dandeenye. Karaa biraatiin waldayni hawaasa adda addaa cimee jiraachuu dhabuu fi koreewwan adda addaa sadarkaa Araddaatti ijaaramaniifi ijaarsi garee misoomaa cimee karooraan hoogganamuu hin dandeenye. Hojiiwwan misoomaa magalaa keessatti hojjataman irrattiis tooftaa adda addaatiin hawwaasni humnaa fi maallaqaan akka hirmaatu hin godhamne. Sirni abbootiin qabeenyaa tajaajila adda addaa irratti bobba’uu isaan dandeessisuufi waltajjiin marii idilee qophaa’ee gahee isaanii akka bahan hin godhamne. Kanaafuu bara 2003 keessa dhimma xiyyeeffannaan itti kennamuudha
Kutaa II II Mul’ata Ergama, Duudhaalee (hooda ) (Valves
1.1 Mul’ata (Vission) Magaalaan Awwadaay Gaafa Afiricaatti Jiddugala Daldalaa fi Tajaajilaan beekkamtuu akka tahuu Dorgommii Diinagdee isii Mirkaneeffachuun Jiraattoota isiif Mijjooytuu taatee akka argamtu hojiin ni Jalqaba. 1.2 Ergama (Mission) Tarsimoo Muuxannoo Gaggaarii fi Paakeejii bulchiinsa gaarii magaalotaa hojiirra Oolchuun, humna raawwachiisummaa waajjiraa cimsuudhaan, gaggeessitootaa fi hojjattoota aantummaan ummataa fi itti gaafatamummaa qaban horachuun, Tajaajila saffisaa fi haqa – qabeessa fedhii fi faayidaa Ummataa jiddu galeessa godhotan hawaasaaf dhiheessuudhaan, hubannoo ummataa gabbisuunifi hirmaannaa abooti qabeenyaa cimsuu dhaan Maasfen pilaani magaalaa fooyyessuuf hoojiirraa Oolchuudhaan humna faaynaasii Waajjiraa karaa ammayyaa’aa ta’een guddisuu dhaan, rakkoolee bu’ura misoomaa magaalaan qabdu furuudhaan , Hojii dhabdummaa salphisuun jiddu gala misoomaa naannawa isin akka taatu godhuudha. 1.3 Duudhaalee (Hooda) (Values) 1. Malaammaltummaa irratti qabsaa’uun aadaa keenya. 2. Tajaajilamtoota keenyaaf kabaja ol’aanaa qabna 3. Bu’aan Hojii keenyaa Sochii gamtaa keenyaati 4. Hojii Keenyatti aantummaa fi itti gaafatamummaan hojjanna 5. Yeroo Hojii Kabajuun aadaa keenya 6. Maastar pilaaniin magaalaa teenyaa qarrayyoo ija teenyaati
Ka’usa Karoora bara 2003 Imaammataa fi labsii, dambii, Tarsimoo, Pakejjii Industarifi Misooma Magaalaa fi Pakejii Bulchinsa Garii Maggaloota Sadarka Fedarla fi Nannootti bahan. Galma Karoora wagga shanii Hiyyuma xiqqeessu fi Guddina Itti fuffinsa fuddu (PRSDP) tarsimoo wagga shanii Bul/Mag/Awwadaay fi Karoora Q/Taj/M/Qopheessa
Manwalottafi Dokamnti JBAHn Qorannon irratti gaggeessfame. karooraa fi Raawwii bara 2002 keessatti cimina fi hanqinoota mullattan. Konfarnsi ummata irratti yadaa bilchata kayyanifi kommile ummata fillannon booda akka dhabbati marii gaggefamtte irrati ummatarra ka’an.
C. Kayyoo fi Galma gurguddo Karoora bara 2003
a. Kayyoo Gurguddoo karoora 2003
- Danddetti rawwachissuma Q/Taj/M/ Qopheessa akka cimuu godhudhan misoomani dingadee fi Hawwassuma Magalla cimma akka demmu godhuu. - Jirattoni magaalaa Mirgaa fi dirqama isaanii beekaa akka deeman haala mijeeysuun Bulchinsa gaarii fi misooma arifachisaa mikaneessuu keessatti gahee isaanii akka gumaachan haala mijeessuu. - Rakkolle Ilaallcha ga’umsa Humna nama nannoowa bu’ura misooma, kanninsa tajajjila, fi Eeggumsa Nannoo jiru akka Salaphatu godhudhan Tajajjila qulqulluu ga’umsa qabu akka baballatu godhuu. - Ijaarsa piroojektoota dargaggoota jiddu gala godhatan hojjachuudhaan rakkooleen dargaggoota dhawaatan salphachaa akka deeman godhuu. - Hanqina Manneen jireenyaa fi dhiyeessi Tajaajila bu’ura misooma magaalaa teenyaa keessa jiru dhawatan salphisuun b- Galamwwan Gurguddo Karoora bara 2003 - I/Gaafatamtoonni fi hojjatoonni qajeelfamoota fi sirna hajmaata uumannii ifatti hubachuu fi sirreessuu danda’an hordofuu ni jalqabu.
- Gaggeessitoot fi Hojjatoota keessa humna adda duree fi gaggeessa magaalaa qulqullina ilaalchaa, aantummaa ummataa fi kaka’umsa hojii gaarii qabatee hojii seektarichaa gahuumsa hojjatuu fi gogganuu uumuu keessatti jalqabbii gaariin kan mul’atu taha. - Tajaajila Si’oomina, iftoomaa fi itti gaafatamummaa qabu Addemsoota hojii Murasa keessatti kanamu jalqabee akka babbaltuu ni godhama. D. Kallatti xiyyee fannoo karoora Bara 2003
- JBAH fi SFSS walitti hidhuudhaan adeemsa hojii qorataman hunda chartari qopheessuu fi walii mallateessuun hojiira oolchuu. - Kallattii Raawii SFSS fooyyeesuun Hojii Sisyaasaa kan bu’uraa tahu hubachuu. - Hojii Foyya’iinsa Siivil Sarviisii karaa qindoomina qabuun hojjachuu. - Sagantaan kun sagantaa yeroo dheeraa gaafatu tahu hubachuun kallattii kanaan raawwachuu. - Leenjii hubannoo Uumuu hojjattootaa fi geggeesitoota sadarka sadarkaadhaan jiraniif bal’inaan kannuun ilaalcha qulqulluu, aantummaa ummataa fi kaka’umsa hojii gaarii akka qabaatan godhuu. - Konfiransii ummataa, mani fi leenjii gaama hawaasa adda addaa gaggeessuudhaan, koreedhaabbii fi mana mani wajjiin dhawwataan mariachuun himaannaa Ummataa rooga hundaan cimee akka deemu godhuuu. - Tajaajila buquqa (koosii) goggogaa kaasuu keessatti gahee abootti qabeenyaa, ummataa fi Bulchiinsa magaala addaan baasuun namayyuu gahe isaan beekee akka bahu godhuu
- Sochii hojii IMX babalisu keessatti IMX duraan ijaaraman cimsuudhaan dhawaataan itti deemu. - Hojjiwwan bara 2002 keessatti jallqabamani osso hin xummuramin hafan xummuruu. - Hojiin hundii kallatti imammata tarssimoo fi Pakejii sektar magalla keessatti ibsaman burreffachun kallatti kanan akka rawwatamu taasisuu. E.
- Adeemsa hojii cheeklistii dhaan hordafuun hanqinoota jiran ji’a ji’aan qorachaa sirreessaa deemuu. - Qoodafudhattoota sagantaa kanaa wajjiin walitti hidhamiinsaan hojjachuu. - Kaayyoo fig alma karoorichaa Irratti hojjattoota Qajeelcha maanaajimantii waajjira, caasaa Araddaa fi Araddaa gadii wajjiin manii adda addaa gaggeessuun namayyuu gahee isaa akka beeke bahu godhuudhaan madaala deemu. - Sochii hojii torbaaniin qorachuun hanqinaa fi cimina jiru addaan baasuun akka beekan godhuudhaan akka sirreefatan deegaruun kanneen hin sirreefanne irratti tarkaanfii fudhacha deemuu. - Karooricha irratti korre dhabbi mana marii magaalaa dhimma dingadee industari fi misooma magaalaa akssumas korrewwan dhabbi hundaa wajjin mariiyachuun deggarsa irra eggamu akka godhan Tasisuu. - Qammoolee hojii sekkatara Mana Qopheessa wajjin Walitti dhufenya hojii qaban hundaa walin sinrna hojammat qindommina fi qunamtii hojii garii itti fuffinsa qabu ummun hojjachuu. wal
3.Hojii Ijoo fi Gurguddo Karoora bara 2003 3.1 Hojji Ijoo - Q/Taj/M/Qopheessa Hummna adda duree fi gaggeessa Addemsa Hojii fi Hojjattota Qulqullin ilallacha ummata fi kakka’umsa annattuma hojii garee qabatee hojii sektaricha
ga’umsan hojjatu fi hogganu. Saddarka magaalaa fi arddootatti ummudhan imammata misooma magaalaa hojiitti hikkun guddina safisafi itti fuffinsa qabu mirkana akka deemmu goodhudha. 3.2 Hojii Gurguddoo - Paakeeji Industarii fi misooma magaalaa fi Paakeejjii Bulchinsa garii magaalootaa Ka’uumsa godhachuudhaan dhimmoota armaan gaddii irratti xiyyefane kan Hojjanuu ta’a - Humna Raawwachiisummaa keenyaa fooyyeessuu
- Hojii – dhabdummaa xiqqeessuu - Tajaajila Qulqullina magaalaa Fooyyeessuu - Rakkoo, Tajaajila Hawaasummaa, Aadaa, Bu’uralle misooma dhawatan hikka demmu . - Rakkoo mana jireenyaa salphisuu
- Pilaaniin guddinaa Gara maastar pilaatti fooyyeessuus - Sirna Qophii, Dhiheessaa fi Bulchinsa lafaa fooyeessuu - Sirna Sassaabbii galiifi Bulchinsa Faaynaansii dadhabaa fooyyeessuu - Sirna Qabinsa Ragaa fi odeeffannoo keenyaa fooyyeessuu
3.2 Hojiillee Gurguudoo 3.2.1 Pakejji Industari fi Misooma Magaalaa ilaalchisee
A. Sagantaa Misooma Dargaggootaa Sagantaan kun Waajjira Dargaggoofi Ispoortii Wajjiin qindoominaan kan hojjatamu taha. Kaayyoo Dargaggoonni Misooma magaalaa keessatti gaggeeffamu irratti yaada karooraa burqisiisuun qaama karoora godhee mirkaneessu irraa kaasee hanga raawwiitti hirmaachuudhaan misooma magaalaa irratti akka hirmaatan godhuudhaan misooma irraahis fayyadamoo taasisuu Galma 1 Dargaggoota magaalaatiif iddoon Tajaajila adda addaa itti argatan akka guutamuu danda’u hojiin ni eegala Hojii Hojjatamu - Ijaarsa jiddu gala dargaggoo gaggeessuu - Waajjira keellaa iddoo haragalfiitiin gurmeessuu Galma 2 Dhuma karoora waggaa irratti hirmaannaan dargaggootaa hojiiwwan misoomaa Naannoo karaa Mootummaatiin karoorfaman irratti %10 ni gaha. Hojii Hojjataman - Karoora Waggaa qopheessuuf yaada burqisiisuu irraa kaasee rakkoolee jiran duraa duubaan kaayuudhaan qaama karoora qopheesseen mirkaneessuun raawwi isaa irrattis akka hirmaatan qaama Dhimmi ilaalu Wajjiin godhuu - Konfaransii misooma dhaabbataa, dargaggoonni qooda fudhatan waggatti al lama gaggeessuu
- Gurmaa’insi dargaggootaa kanneen akka waldaya dargaggootaa, liigii dargaggootaa k.k.f waltajjii siranaa hundeeffachuudhaan gaggeessuu. - Kilabootaa fi Gumiilee Manneen barnootaa tii waliin ragaa wal qunnamtii hojii qabnu irratti kurmaanaa walii Wajjiin karoorfachuu fi Raawwii isaa madaalaa deemuu. - Barattootni lammii amala gaarii qaban ta’uu barnoota isaanii irratti akka ciman dhumaa barnootaa Waggaa irratti badhaasuu. - Hirmaannaa dargaggootaa sochii Ispoortii adda addaa irratti qaban cimsuuf waldorgommii Ispoortii Maqaa Magaalaaatiin hundeessuudhaan gaggeessuu KAYYOO:- Dargaggoonni magaalaa teenyaa lammii amala gaarii qaban akka tahanii fi misooma nannoo isaanii irratti akka hirmaatan godhuu GALMA 1 :- Hubannoo dargaggoota misooma magaalaa fi Paakeejii irratti qaban foyya’eeti argama. Hojiilee Hojjataman • Paakeejii misooma magaalaa fi industrii qindaa’ee irratti dargagootaaf leenjii kennuu • Sochii Bulchinsa magaalaatii fi hirmaannaa dargaggoota mata duree je’u irratti marii gaggeessu. • Yaada Bu’ura karooraa akka burqisisanii fi dhimmoota dursa argachuu qaban qaama karoora godhachun mariin mirkaneessuu. GALMA 2:- Hirmaannaan dargaggoota roga hundaa dabaleeti argama. Hojjiilee hojjataman • Yaada karoora ofiif burqiisisanii fi qaama karoora akka tahuu murteessan irrattti gahee isaan addaan baasuun waliigalteen gahu. • Kilabootaa fi guumilee adda addaa mana barnoota keessatti ijaaraman Walitti dhiheenyaan hojjachuu • Wajjira dhimma ilaalatu wajjin qindominaan hojjachuu • Dargaggoota hirmaanaa gaarii agarsiisaan waltajjii qopheessuun badhaasu • Barattoota Qabxii gaarii fidan badhaasuu
• Ji’oota gannatiif yeroo boqqonna isaanii sochii ispoortii fi barnoota irratti akka hirmaatan haala mijeessuu. • Ijaarsa J/Gala dargaggoo keessatti hirmannaan dargaggoo 30% akka tahuu hirmaachisu. Galma 3 Dargaggootaaf carraa hojiitii uumuu fi iddoo oolmaaya qopheessuu keessatti sochiin gaariin ni mul’ata Hojiillee hojjatamu • Dareen Dabalataa afur hirmaanna uummataatiin ni ijaarama • Ijaarsii iddoo olmayaa dargagoota eegaluu • Mana barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti dareen dabalataa deeggarsa NGO akka ijaaramu haala mijjeessuu
Karoora sagantaa Misooma Dargaggootaa bara 2003
Lakk Hojii Karoorfame 1 Safartuu Karoora waggaa 5 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Kur 2ffaa 5 Ibsa Kur 3ffaa Kur 4ffaa -
Dargaggoota University yeroo Lakk boqonnaa barsiisan isaanii deeggarsa ijoollee adda
addaa godhuu. Dargaggoota waa’ee
magaalaatiif Marsaa fi
magaariisuu magaalaa irratti 3 leenjii hubannoo kennuu Dargaggoota Qabxii gaarii Nama argatan kutaa 10ffaa fi 12ffaa 4 badhaassuu Dargaggoota magaalaa Lakk 400 100 100 100 100 20 20 -
Teenyaa duula qulqullina akka 5 gaggeessan godhuu Dargaggoota magaalaa Lakk teenyaa leenjii hubanno gara HIV/AIDS 6 akka qabaatan Lakk 400 100 100 100 100 kennuu. Kitaaba dargaggootaaf bituu 400 100 100 100 100
B Sagantaa Kaayyo
Hojii misoomaa magaalaa IMX babal’isuu jiddu galeessa godhate gaggeessuudhaan hiyyummaa magaalaa keessa salphisuufi misooma itti fufinsa qabu fiduudhaan baadiyyaa fi magaalaa diinagdeen Walitti hidhuun abbootii qabeenyaa kan misoomaa akka horatan godhuu. Galma 1 Waldayoota IMX duraan jaaramaniif dursa kennudhaan iddoo oomishaa fi gurgurtaa % 60 akka argatan ni taasifama Hojii Hojjatamu - Wiirtuu jiddu gala oomisha waldayoota 5 tajaajilu dhaabuu - Namoota ijaaramuu hin dandeenye fedhii hojii qabaniif iddoo bubuutuu ganda keessa kireeffatanii akka itti fayyadaman godhuu - Iddoo jiddu-gala oomishaa gurmaa’e lama ijaaruun waldayootaaf kennuu - Iddoowwan oomishaa ijaaraman dursanii bu’urri misoomaa akka guutamu godhuu. GALMA 2:- Hojjatoota Qajeelcha Tajaajila mana qopheessa keessaahuu hoggantoota fi abbooti Adeemsa hojiitiif leenjii ijaarsa dandeetti fi hubannoo cimsu kennuu Hojjiilee hojjataman • Sagataan PIMM qinda’e fi meeshaalee leenjii qopheessuu • Leenjii hojjatoota qajelcha Tajaajila mana qopheessa fi qaamoota dhimmii ilaalatu kennuu. • Muuxannoolee gaggaarii ammaan dura turan addaan baasuun babalisu GALMA 3:- Hanqinoota Adeemsa hojii IMX ilaalchi saanii mul’atan sakata’un tarkaanfii sirreessa ni fudhatama. Hojii Hojjataman • Hojiin IMX hojii ijoo akka tahee walgalteera gahu • Qophii fi kennaa lafaa akkasumaas deegarsa biro irratti cinaachaa cima fi lafa jiru qorachuun tarkaanfii sirreessa fudhachuu.
• Walitti hidhamiinsa qaamoota Dhimmi ilaalatu kenniin biro Wajjiin jiru qorachuun hanqina jiru jireessu . GALMA 4 Deegarsii kennamu intarpiraayisoota duraan ijaaraman cimsu irratti akka xiyyeefatamu godhuu. Hojii hojjatamu • Intarpirizoota carraa hojii bal’aa uuman ciminaan deegaruu • Deegarsa godhamu karoora fi cheek lisiitin ji’a fi kurmaana qorachuu • Iddoo Oomishaa fi gurgurtaa moodeela tahu tokko qopheessuu fi ijaaruu GALMA 5:- Jiddu gala oomishaa haala baasii qusatuu akka hojjatamanii fi itti fayyadamtootaaf karaa iftoomina fi itti gaafatamummaa qabuun itti fayyadamtoota harkaan gahuu. Hojii Hojjatama • Hojiilee bara baajata 2002 eegalamanii hin xumurin xumuruu • Iddooleen Omiishaa fi gurgurta ijaaramaan karaa iftoomina itti gaafatamummaa qabuun itti fayyadamtoota harkaa gahuu sadarkaa sadarkaan mirkaneefachuuf bobbaa dirreen qorachuu Galma 6. Magaalaa teenya keessatti jiddu galeessa oomishaa fi gurgurtaa tokko ni ijaarama. Hojjii Hojjatama • Iddoon oomishaa M2 500 tahuu Waajjira lafaa wajjiin qopheessuu • Ijaarsa iddoo omishaa kana haala baasii qusatuun ni ijaarama • Jaarmeeynii magaalaa walqoof kafalee 83000 akka galuu godhuun kanneen didan seeraaf dhiheessuu. Galma 7 Waldayoota IMX adda addaa 6 tahan kanneen miseensota 30 ol qabaniif hojiiwwan ijaarsa bu’ura misooma adda addaa qarshii (Kuma dhibba lama) 200,000 oliin lakkaa’amu hojjachuudhaan Walitti hidhaminsa gabaa ni argatu
Hojii Hojjatamu - Hojiiwwan Piroojaktii misooma adda addaa magaalaa keessatti gaggeeffamu irratti dursa waldayoota IMX ijaarsaatiif kennuu - Meeshaalee ijaarsaa “piroojaktii kanaaf barbaachisu akka dhiheessan waldayoota IMX tiif kennuu - Waldayoota hojii sibiilaa fi mukaa irratti bobba’an meeshaalee hulaa fi shubbaakaatiif dursa waldaya IMX magaalaaf kennuu - Ijaarsa karaa koobilistoonii irratti hojii dhabdoota leenji’anii hojii koobilistoonii irratti akka bobba’an godhuu
C. Misooma Manaa
Kaayyoo Manneen magaalaa kanneen Maastarpilaanii Magaalaatiin walsiman 1000 kaadistarri hojjachuudhaan lakkoofsa manaa guutuu ta’e itti kennuu. Galma 1 Maneen magaalaa Awwadaay 1000 ragaa seera qabatee fi kadistarri hojjatamee arguudha - Manen Magaalaa 1000 lakkofsa mana qabu arguudha. - Manen magaalaa master plani Wajjiin wal hin simne addan baasuf qorannaa gaggeessuu. Hojii Hojjatamu  Manneen erga Ijaaramanii yeroo dheeraa turan hojii reegulaaraazeeshinii gaggeessan seera qabsiisu fi kaadistara hojjachu.  Manneen seera qabatan addaan baasuun Lakkoofsa mana kannuufii  Manneen seeran alaa maastarpilaaniin wal hin simne addaan baasuun galmeessufi furmaata fuula duraa qorachu  Namoonni mana magaalaa keessatti jaaranii iddoo biraa jiraatan bakka bu’aa isaanii seeraan bakka buusuun akka wajjira beeysisan gochuu.  Namoonni Mana kireesanii fi kireefatan walii galtee barreefamaatin akka raawwaatan tumaa qopheessuun, Hawaasa irratti mari’achisuun Mana mariif dhiheesanii mirkaneessuuf muuxannoo naannoo biro qorachuu.
Galmaa 2 - Maneen arradda magaalaa tenyaa 1000 kan ragaa ammayatin qindawu isaani arguu. - Mannen Araddaa kan nannoo invastimenti argamu 10 bakka bu’uu isanii arguu dha. - Mannen araaddaa kan nannoo daldallatti argamu shalaagame gatti shallagiisani arguu
Hojii Hojjatamman - Walii galtee Mana Magaalaa jimaa 20 haaromsuu fi gatii dabaluu - Galii Mana Araddaa fooyyeessuu  Manneen Araddaa 10 J/gala gabaa jiran addaan baasuun shalaggii isaanii Hojjachuun Invastimantiif qopheessu.  Aboottii Mana keessa Jiran mari’achiisuun kan dandeeytii qabuu akkaata Istandardii Iddootiin akka Ijaaru dursa kannuufi  Kanneen dandeeytii hin qabne addaan baasuun Aboottii Qabeenya akka buusaniif kannuu .  Namoota Mannen Araddaa Naannoo daldalaa keessa jiru mana jireenyaatiif keessa gala jiran kanneen yoo lafa argatan man ijaarachu danda’an addaan baasuun dursanii akka lafa argatan godhuuf qoranna gaggeesu.
 Manneen Araddaa Labsii 47/67 dhaalaman addaan baasuu.  Manneen seeran alaa qabaman gadiidhiisisuun seera qabsiisu  Aboottii mana Araddaa Wajjiin waliigaltee guutuu  Kafaltii kiraa Manneen Araddaa fi Mootummaa qorachuun fooyeessu  Kiraan mana Araddaa yeroon akka sassabamu hordafuu.  Suphaan Manneen Araddaa karaa Investimantii hin gufachiifnee fi seera qabeessa taheen seeraan akka raawatamu hordafuu.  Ragaa Manneen Araddaa bifa ammayyaan gurmeessu. Kaayyoo Galma 3
Rakko Manajirenyaa Magaalaa kan salphate arguuf Namoonni 100 Abba manatahu Kireessaa fi kireyfata giddus waligalteen mallatteeffamuu ni jalqaba.
Hojii Hojjatamu  Hirina mana jireenyaa Araddaa 02 keessa jiru fedhii fi humna isaanii Wajjiin addaan baasuu.  Namoota waldayaan mana Ijaarachuu fedhan gurmeessu  Ulaagaa calalli Namoota rakkoo mana jireenya qabanii qopheessun mirkaneessu  Rakkoo Namoota mana kireesanii fi kireefatamu Jiddu jiru karaa nagayaatin akka hiikamu godhuu.  Namoonni Mana kireessan Alawaalaafi mana ficaanii akka qabaatan godhuuf abbootii manaa mari’achiisu.
 Aboottiin Qabeenya mana gusannaa Ijaaranii kireesani Afeeran Jajjabeessu fi mari’achiisuu
Misooma Manaa irratti hojii Bara 2003 karoorfame
Lakk Hojii Karoorfame 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manneen Araddaa investimantiif Mijjaawwaa ta’an addaan baasuu Namoota Manneen Araddaa karaa seeraan alaan waliif dabarsan irratti himata banuu Manneen Araddaa abbaa qabeenyaatiin gara gamootti jijjiiraman addaan baasuu Shalaggii Mana Araddaa hojjiachuu Kaadistara Manaa Hojjachuu Walii galtee Mana Araddaa fi Dhunfaa raawwachuu Ajaja Mana Murtii Raawwachuu Waldiddaa daangaa hiikuu Hayyama mana jireenyaa kennuu Safartuu Lakk Nama Mana Mana Lakk Lakk Lakk ,, Lakk Karoora Yeroo Raawwii Waggaa Kur 1ffaa Kur 2ffaa 12 3 3 12 12 15 1000 100 400 400 1000 4 14 3 3 4 250 25 100 100 250 1 14 3 3 4 250 25 100 100 250 1 Ibsa Kur 3 3 3 3 4 250 25 100 100 250 1
Kur 4 3 3 3 3 250 25 100 100 250 1
Piroojaktii Caalbaasiin Kenname Lakk hordofuu Dizaayina Piroojaktii qopheessuu Lakk
D. Sagantaa Hirmaanna Ummataa
Kayyoo 1 Jiraattonni Magaalaa teenyaa Misoomaa fi Bulchiinsa gaarii mirkaneessuu keessatti akka caalmaan guddatee fi misooma fi Bulchinsa gaarii kanarraa fayyadamoo taasisuu dha. KAYYOO 2 Jiraattonni magaalaa misooma fi Bulchinsa gaarii mirkaneessu keessatti gaheen isani akka guddatu taasisuudha. GALMA :- Hojjiwwan misooma magaalaa teenya keessatti gaggeefamu gaheen ummata 30% ol ni guddata. Hojiiwwan hojjataman Abbootti qabeenyaa, dhaabbile miti Mootummaa, waldayyota hawaasaa fi Afooshaalee waliin qindaa’uun hojii misoomaa irratti qopheessuun waliigalteera gahu. - Jiraattoonni Magaalaa hojii misoomaa, Bulchinsa gaarii fi nageenyaa mirkaneessu, irratti bal’inaan hirmaachuu fi bu’aa argamuu irraa fayyadamaa taasisuuf fedhii fi kaka’umsa mata isaaniitin garee misoomaatiin akka ijaaraman kallatti agarsiisuu fi deegaruu. - Jiraattoonni magaalaa, Abbootiin Qabeenya dargaggoota fi dubartoonni akkasumaas jaarmayaaleen hawaasa adda adda yaada karoora burqisisan qaama karoora tahe mirkaneessu irraa eegalee rawwii isaa keessattis galee isaani beekani gamaagama akka deema waltajii sirna kurmaanan qopheessu.
Abbootii qabeenyaa fi jiraattoonni ganda pirojektoota misooma Naannoo burqisissu hanga rawwachuu keessatti beekumsaan, mallaqa fi humnaan akka hirmaatan mari’achiisuu.
Gabatee karoora misooma hirmaannaa ummataa Hojiilee magaalaa bara 2003 Lakk Gosa hojii Safartuu Karoora bara 2003 Baay’ina Nama hojii hirmaat u 1 Waajjira Araddaa jaaruu 01 Aradaa 2 02 Duula qulqullinaa 3 Marsa 4 a 1 2000 50,000 400,000 450,000 2000 50,000 -50,000 AHQMM fi W/Fayyaa Araddaa M/Barnoot aatiifi kosii Lakk 6 600 30,000 30,000 Araddaa AHQMM fi Kanneen Lakk 1km 10,000 300 6000 1000 15,000 220,000 25,000 640,000 15,000 860,000 25,000 15,000 Ida’ama biro Araddaa 01 fi 01 B/K 1 1 500 500 25000 25000 120,000 120,000 145,000 145,000 Araddaa B/K Araddaa wajjiin Ibsa Humna maallaqaan namaa Buusii argamu Ida’ama maallaqaan
gaggeessuu Daree M/B B/K ijaaruu
Biqiltuu dhaabuu Galaana Maqsuu Ida’ama
Karoora Kurmaana 1ffaa Baay’ina Nama Humna hojii hirmaat u maallaqaan
Ibsa namaa Buusii argamu Ida’ama maallaqaan
Waajjira Araddaa jaaruu 01 Aradaa 02 Duula qulqullinaa B/K 1 1 125 125 6250 6250 40,000 40,000 46,250 46,250 Araddaa B/K
Marsa 1 a 1 2 2500 75
gaggeessuu Daree M/B B/K ijaaruu Boolla qotuu Biqiltuu dhaabuu Galaana Maqsuu Ida’ama kosii Lakk Lakk Km 0.25
500 150 250 3750
12500 7500 6250 -
112,500 7,500 6250 3750
Karoora Kurmaana 2ffaa
Nama hirmaat u
namaa Buusii argamu
Karoora Kurmaana 3ffaa Baay’ina Nama Humna hojii hirmaat u maallaqaan
Karoora Kurmaana 4ffaa Baay’ina Nama Humna hojii hirmaat u maallaqaan
Waajjira Araddaa jaaruu B/K 1 125 6250 40,000 46,250
Araddaa B/K 01 Aradaa 2 02 Duula qulqullinaa 3 4 5 6
Bulchiinsa gaarii magaaloota
A. Sagantaa Ijaarsa dandeetti dhaabbiileeti Kaayyoo Walii gala Dhimmoota magaalaarratti sadarkaa sadarkaan gaamni argaman qamni umaa baasu, qaamni Nageenyaa fi qaamni raawwachiisaan magaalaa itti gaafatamummaa isaanii ga’umsaan bahu akka danda’an akkasumas hirmaannaa ummata magaalaa guddisuu kan dandeessisu gurmaa’insa, misooma humna namaa fi sirna hojimaataa fooyyessuu fi hojirra oolchuu dha. a. Piroojektii ijaarsa dandeetti kaayyoo tokko Manneen marii magaalaa teenya keessa jiran humna bakka bu’ummaa hawaasaa sirnaan hogganuu kan dandeessisu humna isaanii cimsuu fi hirmaannaa uummataa karaa suduudaa fi gurmaainsa qabun cimsuun jiraattoonni tumsa misoomaa amansiisaa fayyadamoo fi abbaa akka tahan godhuu Galma 1 - Manneen marii magaalaa fi Araddaa sirna ifittoominaa fi wal fakkaatuun hooggannun miseensonnis sirna itti gaafatamummaa isaanii bahuu dandeessisu haala mijjeessuu. Hojimaata 1 Hubannoo Miseensota cimsuuf wajjira Afayaa’ii waliin qindoominaan hojjechuu fi deeggarsa barbaachsaa godhuun haala mijjeessuu. Galma 2 - Misoonsooti mannen marii fi koreen dhaabbii dhimmoota magaalaa irratti hubannoo gahaa akka qabaatanii fi hirmaannaan isaanii akka wajji Walitti hidhaminsa qaban irratti leenjii akka tahu ni godhama. Hojimaata Waajjiraa Af-yaa’ii waliin tahuun Miseensota mana mariifi koree dhaabbiitiif karoora, Paakeejotaa, sagantaa fi imaammatootaa fi labsiilee dhimota magaalaa irratti leenjii kannuu. - Karoora waggaa Mana mariif dhiheessuun mirkaneessuu - Gabaasa kurmaanaa koree dhaabbiin qorachuu - Koree dhaabbii wajjiin bobbaan hojii hojjatama jiru kurmaanaan hordofuu
Galma 3 Hirmaannaa ummataa cimmsuuf gurmaainsa adda addaa amantaa umataa argatan waltajjii hirmaachisaa tahe akka dhaabbatuu akka aman godhuu kan danda’u hojii ijaarsa dandeettii ni hojjatamu. Hojimaata 1 - Qaamota Dhimmi ilaalu wajji hirmaannaa ummataa karaa suduudaa taheen hirmaachisuu kandanda’u maanuwalii hirmaannaa ummataa akka qophaa’u deeggarsa godhuu. - Waldayoota hawaasaa mirgaa fi dirqama isaanii beekanii akka hojjatan hirmaannaan isaanii akka cimu leenjii hubannoo cimsu dhimmoota magaataa irratti kunnuu. - Koreewwan adda addaa ummata keessa sadarkaa araddaatti filuu fi dhaabuun dhimmoota isaan ilaalu irratti hubannoo kennuu. - Jiraattoonni magaalaa murteessoo tahan irratti qaamaan argamuun mari’achuu akka aanda’an koonfaransii ummataa yoo xiqqaate waggaatti al tokkoo qopheessuu - Pilaana magaalarratti karoora tarsimo irratti, karoora waggaarratti baasii guddaa kan gaafatan ijaarsa bu’uraalee a Misoomaa addaa tarbiiba Raawwii isaarratti ummanni sadarkaa sadarkaan akka mariatu godhuu - Waltajjii dhabbataa wal marii qaama miti-motumaa kanneen akka Afooshaa, Abbotti amantii, waldaya hawaasaa, waldaya ogummaa Wajjiin hundeessuun dhaabbataan marii gaggeessuu - Piroojaktoota Naannoorratti jiraattoonni keessattuu itti fayyadamtoonni karaa adda addaatiin fayyadamuun humna isaanii, fedhii fi dandeetti isaanii irratti hundaa’uun baasii akka hiratan akka gargaaran, hirmaannaa isaanii cimsuu - Abbootti qabeenyaa Tajaajila tokko tokko kanneen bu’a qabeessummaan isaanii mirkanaa’e akka irratti hirmaatan carraa kannuu
b. Pirojaktii Ijaarsa dandeeytii Qaama Raawwachiiftu. Kaayyoo:- Qajeelchi Tajaajila mana Qopheessaa fi adeemsooleen hojii hojmaata haala bulchiinsa gaarii goonfate qabaachuu akka danda’an angoo, Itti gaafatamummaa fi caaseefama gurmaa’insa seeraa fi dhaabatummaa fi - Raawwatoonni hojii hoggantootaa fi ogeeyyiin karoora rakkoo Naannoo hiikuu danda’u baasuu akka danda’an Tarsiimoo fi tumaalee rakkoo Naannoo hiikuu danda’u akka burqisiisani, hiyyummaa fi hajdhabummaa akka hirsan fayya’iinsa kanniinsa Tajaajila hojiira oolchuu fi ga’oomsa teekiniikaa misooma Naannoo fi baadiyaa deegaruu isaan dandeesisu beekoomsa, dandeeytii fi Ilaalcha akka goonfatan godhuudha. Galma 1 - Adeemsii hojii JBAHn qoratame hundaa keessatti kallattii qorannoon lafa kaayyame qofaan hojjachuun waan gaariin ni galmaa’a. Hojmaata - Adeemsa hojii qoratame caasaan nuuf hin ergamin kan sagantaa bulchiinsa gaarii fi misooma magaalaatiif nu barbaachisan addaan baasuun akka caasan nuuf mirkanaa’u gaafachu. - Adeemsoota hojii Qajeelcha waldorgamsiisuun dhumaa waggaatti badhaasaa deemuu. - Adeemsii hojii Qajeelcha keessa jiran Qindoominaan Walitti hidhamani akka hojjatan godhuu. - Adeemsa hojii Qorataman qixa qoratame qofaan hojiira akka oolan hordafuu fi deegarsa kannuu. - Koree mgntiitioin hojii torbanii Qorachuu Galma 2 Waltajii dhabbii deegarsa magaaloota akka uumamu fi guyyaan magaaloota kabajamu ni jalqaba. Hajmaata. - Gurmaa’insa kaawunsilii magaaloota keessatti hirmaanna keenya cimsuun socha’u
Araddaalee olla fi Aanaa waajjiin waltajjii dhaabbataa marii fi deegarsa - Raawwii Hojii Paakeejii bulchiinsa gaarii fi Misooma magaalaa ilaalchisee waldorgamii sadarkaa godinaa keessatti gaggeefamu irratti hirmaachuu . - Sochii Magaalaa fi bu’aalee argaman kan Ibsuu barrulee Waggaa maxxansuu. - Magaaloota olla Wajjiin waliigaltee deegarsa tajaajilaa fi misooma irratti marii gaggeessu walii mallateessu - Araddoota olla fi Aanaa Wajjiin waliigaltee lafa naannaa’a daangaa fi Qabbeenya Uumuma irratti waliigaltee mallateessumu godinaaf gaafii dhiheessu.
Galma 3 Piroofaayliin magaalaa misooma magaalaa Saffisuuf nu gargaaru dhawaatan qoratame bifa ammayaatiin gurmaa’u ni jalqaba. Hojmaata  Seenaan hundeefama Magaalaa Qoratame bifa kitaabaatiin akka maxxanfamu godhuu  Ragaalee Hawaas diinagdee magaalaa Walitti sassaabuun Qindeessuu  Jijjiirama karaa Hawaasummaa fi diinageeyin bara baraan dhufu galmeessaa deemuu.  Piroofaayilii Invastimantii Qophaa’ee Qaama adda addaaf akka raabsamu godhuu.  Sadarkaa Araddaatti Ragaan hawaasummaa fi diinagdee gurmaa’e akka ta’u godhuu.  Qabeenya Ragaa misooma magaalaa Ibsan Sassaabimu qindeessuu. Galma 4 Hojjattoota digrii lammafaatiin Ebifaman hojii keessa galchuun, kanneen hojjiira jiraniis akka leenji’an ergachuu bu’aan gaariin galmaa’u ni jalqaba. Hojmaata  Hojjattoonni Leenjiif ergaman hojiin madaaluun addaan baasanii qopheefachuu.  Kanneen leenji’anii dhufan Iddoo barbaachisaaratti ramaduu. Galma 5
Hojjatoonni Qajeelchaa 2 tahan leenjii Qaama ol’aanaan kannamu irratti leenjii gaggabbaaboo ni fudhate Hojiiattoonni 30 leenjii gaggabaaboo sadarka magaalaa kannamu irratti dhawaatan hirmaachuun hubannoo foyyee ni qabaatu.
Caasaan namaa bara 2002 humna namaa bara 2003 ramadamee Dha 3 2 w/g 7 4 1 2
Gabatee karoora leenjii adda addaa bara 2003 karoorfame Lakk Mata leenjii duree Qaama leenji’u Karoora leenjii Kur 1ffaa Kur 2ffaa Kur 3 ffaa Dhi Dha w/g Kur 4ffaa Dhi Dha w/g Ibsa waggaa Dhi Dha w/g Dhi Dha w/g Dhi Dha w/ Hojjataa 22 18 40 22 18 g 40
irratti TMG, JBAH Hojjataa fi PBG Imaammata misooma magaalaa
Mootummaa Mana Marii Araddaa Mana
300 50 190 40
50 140 22 50 18 190 40
Labsii fi liizii
m/Mootummaa Jiraataa 140 50 Hojjataa Mootummaa Jiraata Magaalaa Mana/M/Ara fi 150 150 Magaalaa 22 18
Qulqullina eegumsa Naannoo
600 100 100 300 50 50
c. Piroojaktii fooyya’insa sirna Haqaa fi Naamusaa Kaayyoo Gurmaa’insa fooyya’insa seeraa fi hojimaata godhuudhaan magaalaa teenya keessatti Tajaajila haqaa saffisaa fi bu’a qabeessa dhiheessuudhaan hojimaata Bulchinsa gaarii hin tahin irratti duuluufi nageenya ummachuu. Galma 1 Labsii, Danbii Qajeelfamaa fi tumaaleen adda addaa bahan hojiirra ooluu jalqabuudhaan mirgi jiraattotaa kabajamee sochiin misoomaa fi hawaasummaa nama jajjabeysu ni mullata. Hojii Hojjatamuu Seerota, danboota, qajeelfamaa fi tumaalee adda addaa bahan irratti hubannoo qaama adda addaa cimsuu leenjiin ni kennama. Haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin wixineen tumaalee adda addaa bahee ummataan irratti mari’atamee mana mariitiif dhiyaatee akka mirkanaa’u taasifama. Labsii, Danbii, Qajeelfama fi tumaalee bahan hojiirra oolu isaanii hordofuufi deeggaruu fi hanqinoota jiran sireysaa deemuu. Galma 2 Manni Murtii Hawaasummaa araddoota lachuu keeysatti humna namaafi hojimaata haarayaan gurmaa’e. Hojii Hojjatamu - Muuxannoo gaggaarii Manneen murtii hawaasummaa magaalaa biro keysatti jiran sakatta’uufi kanneen qaama olaanaa irraa nuuf ergame hojiirra oolchuu. - Araddoota lachuu keysatti humna namaa hubannoo seeraa qabu filuu, leenjisuu fi ramaduu. - Manneen murtii hawaasummaa kallattii seeraatiin hojjachaa jiraachuu, deeggaruu, hordofuu fi hanqina jiru sirreysaa deemuu. Galma 3 Magaala teenya keeysatti humni seera kabachiisuu gurmaa’ee hojiirra ooluu ni eegala.
Hojii hojjatamu - Tajaajila seeraa kabachisuu ilaalchisee muuxannoo magaalotaa biro jiru addaan baasanii qindeysuu fi muuxannoo gaggaarii karaa naannootiin qoratamee nuuf ergamu Walitti qindeysuun Tajaajila seeraa eegduu kennuu. - Ulaagaa seera eegdoyni ittiin filataman qindeysuu. - Tumaa seera eegdoota mana mariif dhiheessu mirkaneessu.
d. Sagantaa Fooyya’iinsa Sivil Sarviisii Ilaalchisee
Kaayyoo:Hojjattoota ilaalcha dimokraatawaa fi aantummaa uummataa qabu harachuun karoora Misoomaa fi Bulchinsa guurii lafa kaayyanne raawwachuu kan nudandeesisu humna siviil sarviisii ga’oomsa qabu horachuun galma goone ga’uudha. Galma 1 - Siviil Sarvaantii Ilaalcha dimokraatawa qabnii fi Sirna kana Tajaajiluuf qophaa’a tahanii ni gurmaa’a. Hoj:- 1. Heera Mootummaa irratti leenjii kannu • Imaamata ijaarsa dandeeytii fi SFSS Irratti leenjii hubannoo uumuu waggatti al lama kannu. • Leenjii kanname dhawaatan gamaagama deemuu • Qaxarrii, Ramaddiifi Jijjiirraa waagaa siivil sarviisiin kaayameen tahuu qoracha deemuu fi hanqina jiru sirreessu. • Hojjattoota ilaalchaa dimokraatawa hin qabnee fi Imaamata ummata oal’aan filatame hojiira olchuuf qopha’o hin taane qulqulleessaa deemu. • Tarsiimoo muuxannnoo gaggaarii irratti leenjii kannuu Galma 2 - Hojjattoonni Sagantaa Xixxiqaa shaman. - SFSS fi Raawwii teekiniika irratti hubannoo gaha ni qabaatu Hoj- 1. Sagantaa Xixxiqqaa shaman SFSS irratti leenjii waggatti al lama dhawatan kannuu. • SFSS Karoora Adeemsaa fi dhunfaa keessa akka galfatan godhuun ji’aa fi kurmaanaan madaala deemuu. • Hojii SFSS Karaa qindoomina qabuun hojjatama jiraachu kurmaanan madaalaa deemuu.
Galma 3 Rakkoon Ilaalcha Naannawa hoggansaa fi Raawata bira jiru %90 ni xiqqaata Hoji- 1. Madaalliin bal’aa irratti xiyyeefate waggatti al lama ni gageefama • Karoorri bu’aa irratti xiyyeefate akka adeemsaa fi akka oolu godhu. • Hanqinoota jiran dhawaatan qorachuun sirreessa deemuu. • Namoota bu’aa gaarii galmeessan wagga waggaan badhaasuu. • Raawwii hojii kurmaan madaaluun duubdeebii kannaa deemuu. • Waltajii Idilee Torbaannii, Ji’aa fi kurmaana kabajuun rakkoo ilaalcha, ga’oomsaa fi Hoggansaa irratti gabsa’a deemu. Galma 4 Sirna madaallii hojii bu’aa irratti xiyyeeffate Qabxii hojjattootaa galmeedhaan hordofuun, gurmaa’insa fi qabinsa ragaa bu’ura mana hojichaa akka ammayyaa’u hordofuun deeggarsa ogummaa ni kennama. Hojiilee Hojjataman - Hojiilee haala karoorfamaniin yeroo isaanii eeggatanii raawwatamuu isaanii hordofuu - Maqaa Qajeelchaa fi kutaalee Tajaajila kennan qopheessuun iddoo mul’atutti maxxansuu - Hojjattootni baajii qaamaa fi minjaalaa qophaa’e godhachuun iftoomina akka dagaagsan godhuu - Galma, kaayyoo, Mul’ata ergamaa fi duudhaalee mana hojichaa taappeellaa irratti qopheessuun hojiirra oolchuu. - Gita hojii hayyamame, ramaddii argatee fi duwwaa addaan baasuun beekuu fi akka guutamu qaama olii gaafachuu. - Ragaa humna namaa, qaxarrii, ramaddii fi jijjiirraan qajeelfama KSSO bu’ura godhate hordofuu. - Mooraa Qajeelchaa kunuunsuun Alaabaa lameen akka kabajamu godhuu - Yeroon seensaa fi bahinsaa hojjattootaa kabajamuu isaa hordofuu fi guyyaa galmeessuu fi torbannin cunfuu. - Casaan JBAH Qoratame nuuf hin ergamin 5 biroo gaafachuun hayyamsiisu.
Galma 5 Dokumantii qorannoo JBAH tiin gadi bu’ee irratti adeemsotni fi hojjattootni mana hojichaa walii Wajjiin mari’achuun hubannoo gahaa akka argatan godhuun kaayyoo diriiraa baasanii maxxansuun galma irraa eeggamuun hojitti akka jijjiiran ni godhama. Hojii Hojjatamu Abbootii adeemsaa raawwattootaa isaanii waliin Team-Chaartarii qopheessuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa irraa eeggamu bahuuf walii mallatteessanii oolamaya guyya guyyaatiin madaalaa akka deeman godhuu. Karoora walqunnamtii itti gaafatamaa Qajeelchaa, Adeemsota fi raawwattootaa jidduu jiraachuu qabu bifa fooyya’een cimee akka deemu godhuu. Waltajjii marii idilee manaajimantii adeemsotaa fi raawwattootaa mana hojichaa akka idileeffamu godhuu Hojjattootnni sadarkaa kenninsa Tajaajila isaanii madaalaa hojii hojjataniin tajaajilamtoonni hangam akka itti quufan tooftaa itti hordofan diriirsuu. Adeemsotni fi raawwatootni Qajeelchaa iddoo itti aangeeffaman irratti ciminaan akka hojjatan gochuu.
Galma 6 Karoora qajeelchaa irratti hojjattootni hubannoo walii gala akka qabaatan gochuun hojjattoota Qajeelcha a biratti ilaalchi tajaajilamaa ummataa dagaagee abbaan dhimmaa simannaa gaarii fi Tajaajila quubsaa akka argatan ni godhama. Hojii Hojjatamu - Tajaajila kennamuu fi dhimma ummataa uunkaalee PBG tiin akka keessummeeffamu godhuu - Qajeelfamoonni, Labsii, Danbiilee mana hojichaa gadi bu’an bakka tokkotti gurmaa’anii hojjattootni akka hubataniifi itti gargaaraman godhuu. - Qophii Paakeejii Bulchinsa gaarii fi pirinsipiloota naamusaa maxxansuun Raawwii isaa sagantaan koree manaajimantii hojjattoota waliin qorachuu. - Malaammaltummaa fi hojimaata badaa ittisuuf sochii godhuu
- Baajata mana hojichaaf ramadame ifatti maxxansuun hojjattootni akka beekan godhuu. - Deeskii odeeffannoo sirritti gurmaa’ee humna namaa Gahumsa qabuun Tajaajila irraa eeggamu akka kennu godhuu . - Galmee Istandardii hojii Qopheessuun hojiira oolchuu. - Tajaajila kannamuu fi ulagaale gyytamu qaban Hawasaaf Ifa godhuu. - Tapeellaa -------------- 3 - Broosharii -------------- 100 - Waltajii irratti -------------4 - Galmee fi Sanduuqa yaadaa akkasumas Uunkaa komii ifatti sassaaban qophaa’ee torbaanitti ilaalamee qaamolee Dhimmi ilaaluuf duub-deebii kennuu - Iddoo abbootiin dhimmaa itti boqotan faraqaa itti eeggatan akka sirritti Tajaajila kennu godhu.
e. Walitti hidhaminsa Magaalaa fi Baadiyyaa
Kaayyoo Bulchinsa magaalaa Awwadaay Walitti hidhaminsa gama hundaan magaalaa fi baadiyyaa waldaa magaalotaa, obboleetummaa magaalaa fi baadiyyaa uumuudhaan bu’aa waliinii argatanii akka guddatan gochuu. Galma 1 Bulchinsi magaalotaa waliin tahuun dandeettii raawwannaa Gahumsa qabu akka horatan hubannoo kannuun, tarsimoo misooma baadiyyaa fi misooma magaalaa Walitti hidhamanii guddinni misoomaa baadiyyaa wal simee akka deemu hojimaata dandeessisu malli itti diriiru danda’u ni uumama. Hojiilee Hojjataman - Fedhii qoteebulaan Naannoo magaalaa teenyaarraa barbaadu qorachuun adda baasuu. - Fedhii qoteebulaa guutuuf Tajaajila adda addaa fi daldala adda addaa baasuun qaamni adda addaa akka irratti hirmaatan hiiku godhuu - Piroojaktoota Walitti hidhaminsa magaalaa fi Baadiyyaa cimsuuf gahee qaban akka karoorfamu godhuun raawwi isaa hordofuu
- Hojiiwwan misoomaa magaalaa keessatti hojjataman kallattii Walitti hidhaminsa magaalaa fi baadiyyaa cimsuu danda’aniin akka karoorfamaniifi raawwataman hordofuu. Galma 2 Bulchinsa magaalaa komiin Walitti hidhaminsa cimaa yoo ummata faayidaan waliinii argamuu akka danda’u qorachuun Walitti hidhaminsa taasifame irratti waliigaltee waliinii mallatteessuufi walii galtichii yeroo barbaachisaa ta’etti akka haaromfamu ni taasifama. Hojii Hojjatamu - Foormii marii dhaabbataa bakka bu’oonni qoteebulaa magaalaa irraa Tajaajila argatanii waggatti altokko qopheessuu - Walitti hidhaminsa taasifame irratti walii galtee waliinii mallatteessuun hordofuu - Ragaa bu’uraa barbaachisaa ta’an qindeessuun qabuu - Oomisha oomishamu keessa hanga jiraattootni gandichaa fi magaalichaa itti fayyadaman addaan baasuu. - Oomisha leecoolee gabaa biyya keessa fi biyya alaatiif dhihaachuu qaban irratti odeeffannoo waayitaawaa qindeessuu - Guddina diinagdee Bulchinsa magaalichaa ittiin specialize gochuun danda’u daataa bu’uraa piroofaayila Bulchinsa magaalaa irraa fudhachuun qindeessuu. f. Karaa Qophii Odeeffannoo Piroofaayilaa fi Humna Guddina diinagdee Bulchinsa Magaalaa Awwadaay Kaayyoo Magaalaa Awwadaay piroofaayilli isii qophaa’uun daataa bu’uraatiin qabamee humni diinagdee isii maal irratti caalmaan specialize gochuu akka dandeessu qoratamee guddinni gama sektara misoomaa magaalaatiin galmaa’u madaaluun caalmaatti itti fufinsaan deemuu haala itti danda’u mijjeessuu. Galma 1 Odeeffannoon hawaas-diinagdee magaalaa karoora baafachuuf, piroofaayilli kallattii guddina magaalaa qopheessuu fi piroofaayilii invastimantii qopheessuu akkasumas qaamni odeeffannoo barbaadu karaa salphaan argachuu akka danda’u karaa ammayyaa’aan ni gurmaa’a.
Hojii Hojjatamu - Fedhii ragaalee bu’uraa misoomaa magaalaatiif barbaachisaa tahanii fi qaamni adda addaa misooma magaalaa irratti hirmaachuu barbaadan qorannaan addaan baasuu. - Jijjiirrama magaalaan fidaa deemtu sirni itti hordofamuu fi galmeeffamu diriirsuun yeroo yeroon galmeessaa deemuu. - Seenaa hundeefama magaalaa manguddoo irraa kaaseetaa fi barreefamaan qopheessu. - Ragaalee bu’uraa adda addaa qaama adda addaarraa sassaabuun qindeessuu. - Ragaa daldaltootaa - Ragaa Qonnaa jiraataa - Hojjattoota guyyaa - Seenaa hundeeffama magaalaa manguddoo irraa kaasetaa fi barreeffamaan qopheessuu - Ragaalee Bu’uraa adda addaa qaama adda addaarraa sassaabuun qindeessuu. - Ragaa daldaltootaa - Ragaa Qonnaan jiraataa - Hojjattoota guyyaa - Ragaa invastimantii B. Sagantaa Fooyya’insa piroojaktii sirna Bulchinsa Faayinaansii Sagantaa kana waajjira MMD fi galiiwwanii wajjiinkan hojjatamu taha Kaayyoo 1 Sirni Bulchinsa faayinaansii karaa caaseeffama hojimaata qabuun akka hojjatamuufi to’annoo fi hojimaata seera qabuun akka gaggeeffamu godhuu. Galma 1 Seera, danbii fi qajeelfamni faayinaansii bahe hojiirra oluu ni eegala Hojiilee hojjataman - labsii, danbii fi qajeelfamoota faayinaansii bahan irratti leenjii nama leenji’u erguu - Nama leenji’ee dhufe akka hojjattoota leenjisu godhuu
Galma 2 Karoora faayinaansii misooma magaalaa jiddu gala godhatee fi qindoomina qabu akka jiraatu ni taasifama. Hojiilee hojjatamu - Manuwaalota qophii karoora faayinaansiitiif nuuf ergaman bu’ura godhachuudhaan karoora kaapitaala invastimantii akka qophaawu godhuufi kanuma ka’umsa baajata 2003 godhachuudhaan mana marii magaalaatiif dhiheessanii mirkaneeffachuu. - Jiraattotni magaalaa keessattuu dubartoota, dargaggoota namootni bebbeekkamoon k.k.f piroojaktii misoomaa ykn karoora faayinaansii kaapitaalaa yeroo qophaawu rakkoolee isaaniifi fedhii isaanii addaan baasuudhaa fi tartiibaan kaa’uu akka danda’an dadammaqinaafi karaa dimokraatawaa ta’een hirmaachuu kan dandeessisu sirna hojimaata diriirsuun kanuma hojiirra oolchuuf kan gargaaru waltajjii hubannoo uumu qopheessuu - Sagantaa Raawwii faayinaansii kana hordofuufi gamaaggamuun tarkaanfii sirreessaa fudhachuun sirreessaa deemuu. Galma 3 Sirna saffisaa, baasii qusatu diriirsuun israafummaa ittisuu kan danda’u sirna bittaa fi Bulchinsa qabeenyaa fi meeshaa faayidaa hin qabne karaarraa maqsan haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin qophaawee hojiirra ooluu ni eegala.
Hojiilee Hojjatamu. Qajeelfama keessa itti fayyadama boba’aa itti fayyadama meeshaalee isteeshinarii qopheeffachuu Akkaataa itti fayyadama Qabeenya karaa qusannootiin fayyadamuu nu dandeessisu irratti abbootii adeemsotaaf leenjii kennuu. Adeemsa hojii haaraya qorachuudhaan hanqinoota jiran addaan baasuufi hanqina jiru irratti leenjii kennuun sirreessuu Kurmaana kurmaanaan oodiitiin keessaa akka godhamuu fi waggatti al tokko bu’aa isaa mana mariitiif dhiyeessuu Kaayyoo 2
Tajaajila hawaasummaa fi bu’ura misoomaa baballisuu kan dandeessisu sirna ramaddii faayinaansii amansiisaa fi sirna Bulchinsa galii saffisaa fi bu’a qabeessa ta’e diriirsuu. Galma 1 Qajeelfamoota fi manuwaalota sirna sassaabbii fi itti fayyadama galii bahanii nuuf ergaman hojiirra ooluu ni jalqaba. Hojii Hojjatamu - Haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin danbootaafi qajeelfamoota nuuf ergaman irratti hundaa’uudhaan taarifoota fooyya’uu qaban qorachuudhaan mana mariitiif dhiheessuu - Taarifoota sadarkaa naannootti bahaniifi mana marii magaalaatiin akka mirkanaa’an qorataman osoo hin mirkanaawin dura hawaasni sadarkaa sadarkaan akka irratti mari’atan gpdhuu. - Qajeelfama hojii ramaddii gibiraa fi ol iyyata waajiraa galiiwwaniitiin Wajjiin baasuu hojiirra oolchuu. - kafaltoota gibiraa fi baaqii isaanirra jiru gosa gibiraatiin addaan baasuudhaan seeraan galmeessuu dhaa fi Waajjira galiwwanitiin walin akka Sassaabamu godhuu. - Jiraattoota magaalaatif galiin sassaabame Tajaajila maaliif akka oole sirna odeeffanno itti argatan diriirsuu. - Karoora galiirratti ummanni akka hirmaatu fi akka mari’atu godhuun karoora galii fooyyee tahe qopheesuun hojiirra oolchuu.
3.2.3 Saganta magaalaa
fooyya’insa lafaafi Pilana
Sagantaan kun Waajjira lafaa fi Eegumsa naannoo Wajjiin qindoominaan kan hojjatamu taha A. Piroojaktii galmeessa ragaa fi Qabeenya lafaan walqabatu Kaayyoo Odeeffannoo teeknoolojii ammayyaa’aa irratti kan hundaa’e sirna galmeessa lafaa fi dhimmoota lafaan walqabatanii diriirsuun hojii bulchinsaa fi misooma lafaa bu’a qabeessaa fi saffisaa ta’uu isaa mirkaneessuun madda kiraa sassaabdummaa gogsuudhaan misoomaaf haala mijjaawaa uumuudha. Galma 1
Qabiyyeen lafaa fi manaa ragaa sirrii ta’e kallattii seeraafii hojimaatni sirrii akka diriiru godhuudhaan ragaan mana nama 1000 bifa ammayyaa’aan qindaa’ee akka taa’u ni godhama Hojii Hojjatamu - Kaadistara seera qabeessa ta’e 1000 hojjachuudhaan bifa ammayyaa’aan qindeessuun gurmeessuu. - Manuwaalota fi qajeelfamoota waa’ee lakkoofsa kaadistaraa kennuuf nu gargaaru bifa ammayyaa’aan istaandaardii isaa akka eeggatu deeggarsa gochuu. - Kaadistarri 1000 ta’u bifa haaraan ni dalagama. - Beeysisa raadiyoon baasuun kaartaan bara 1997 duraa haaromsuu fi haquu. B. Piroojaktii fooyya’insa sirna misoomaa fi Bulchinsa lafaa . Kaayyoo Magaalaa teenya keessatti sirna Bulchinsa lafaa liizii diriirsuudhaan dhiheessa lafaa saffisaa fi haqa qabeessa godhuudhaan Qabeenya xixiqqaa qabnu sirnaan itti fayyadamuudhaan misooma keenya saffisiisuu. Galma 1 Sirna Bulchinsa lafaa kan sirna liizii bu’ura godhate guututti hojiirra ooluu ni jalqaba. Hojii hojjatamu - Danbiin beenyaa fi qajeelfama irratti hubannoo cimsuuf leenjii kennuu - Lafa bara 2001 as kennamte hunda sirna liiziitiin akka bultu godhuu. - Qaama Raawachiiftuuf leenjii kannuu - Hawaasa Labsii fi danbii liizii irratti mari’achiisuu. - Qajeelfamoota sirna liizii federaalaa fi Naannoo irraa nuu ergaman hojiirra oolchuu. - Lafa haaraya kennamu hunda sirna liiziitiin akka bultu godhuu - Kafaltii jalqabaa kan liiziitii fi lafa liizii dhaan fudhatamte yeroo jaarmayni itti eegalamu fi xumuramu godhuu Galma 2
sirni dhiihessa lafa karaa iftoomiina fi duraaduuba qabun rawwatamuu ni jalqabama. Hojjii Hojjatamu - Akkataa Istaandardii naannootiin murta’en lafti taajaajilaa adda addatiif oluu akka keenamu godhuu . - Lafaa fuullee mana jireenyaa gammoo kondiminiyeemif olaan adda baasuu - Lafa taajaajiila Hawwassuummaa adda adda tiif olaan (maneen barnoota, keelaa fayyaa,iddo gabaayaa fi k.k.f) dursaani qopheessuudhaan kanneen abbotii Qabeenya dhuunfatiin ijjaramaniif caalbassii keenuu. - Laftii mana jiireenyaa m220,000 dursaani adda hiranii akka qophaa’u godhuudhaan akka jarmaayni istaandardii egaatee gaggeefaamu godhuf Qaama Dhimmi Ilaalu Wajjiin Qindominaan Hojjachuu. Galma 3 Tajaajila Ummataatiif lafa godhisisuudhaan qajeelfamni Raawwii, Labsii fi danbiin mootummaan bahe hojiira ni oola. . Hojiilee hojjataman - Leenjii hubannoo uumuu qaama hoggansaa fi adda addaatiif kanama. - Lafa misoomaaf ooltu irraa qonnaan jiraataa ka’aniif sochi hojii magaalaa keessa seenuu akka danda’an karoora daldalaa (Business Plan ) Tajaajila gorsaa karaa bilisaan godhuudhaa deeggarsa IMX baballisuuf godhaman hunda godhuu. Galma 4 Lafa Misoomaaf barbaachisu duursanni adda baasu qabachuudhaa fi misoomsuudhaan halaa bu’aa qabeessa saffisa fi haqa qabeessa ta’een Istaandardii JBAHn kaaamen hojii irra ni oola. Hojiilee Hojjataman
Lafa Tajaajila Sirrii kannuu qabanii gad kennaa jiran addaan baasuun Abbootiif dursa kennuun kanneen dandeetti qaban jaarmaya sadarkaa eeggate akka Ijaaran godhuu fi kanneen dandeetti hin qabne kalatti seeraatiin nama danda’uuf kennuu akka dandeenyu mari’achiisu. - Lafa Tajaajila adda addaatiif kennu Istandardii bahee nuuf ergameen hojii irra akka oolan godhuu.
Galma 5 gochii seeraan alaan lafa rratti raawwatamu dhaabsisuu fi Sirreessuudhan karaa ifa tahee fi haqa qabeessa taheen haala dinagdee magaalaati Wajjiin Walitti hidhaminsa qabuun raawachuuf Waajjira lafaa Wajjiin Qaindoominni ni uumama. Hujmaata. - Rakkoo ilaalchaa lafa karaa seeraa alaatiin qabantu irratti hawaasni Raawwata ni fi hoggansi qabu furudhaf leenjii Kennu - Hoggansi Magaalaa Rakkoo Kanaaf xiyyeeffamaa Kennu dhaaf qaama hojii ittisa fi to’annoo kanaa irratti baba’ani deegarsa cimaa akka keennu godhu - Saamiicha fi jaarmaya lafaa karaa seeraa elaatin gaggeeme ragaa gahaa qabaachudhan terkaanfi sirreessaa fudhachu - Kenatti ijeersa seeraa alaa hin jajjabeesineen qabiyyee ragaa hin qabne kan yeroo dheeraadhaaf turan kan Master pilaana magaalatiif guddina magaalaa fulduraatiin wal simu bifa qabsiisuuf seera Ragularigashinii fi hujmata Ifa ta’e lafa ha’achudha fi hojii irra Oolchuu kanaaniis lafa fi Mana ragaa hin qabne 500 Seera guuthu akka qabaatan godhu. Kaayyoo Qophii dhiheessaa Bul fi Misooma lafaa ilaalchise gurmaa’insa qaama dhimoota ilaalatanii karaa ifa teheen hojii irra Oolchuun tajaajilamtootaaf Tajaajila gahaa dhiheessuudhan Misooma Ariifachiisuu. Galma 1 Misooma fi Bul/ lafaa ilaalchisee seeroota qajeelfamootaa fi Manuwaaloota akkasumattis gurmaa’insa jiru ilaalchisee Rokkoolee jiran sakkata’amu qaamni Dhimmi ilaalu fi Waajjirri Lafaa fi Eegumsa Naannoo furmaata akka itti laatu ni godhama.
Hujmaata Raakkoole jirtu addaan kan danda’u koreen ni dhaabbata, Rakkooleen jiran addaan bahani qaama Dhimmi ilaalun furmaata akka itti kenamu ni godha. - Dhimmoota lafaa wajjin wal qabatama adeemsi hojii JBAHn qoratamani gadi bu’an Rakkoolee Bulchinsa gaarii dura irraa hiikuuf kan nama dandeessisu Sakatta’uudhafi hiikuu, haaluma kanaan furmaata kennuu Waajjira Lafaa Fi Eegumsa Naannoo A. Sirna ragaa Magaalaatii fi galmeessa qabeenyaa dhimmota B. Raawwii liizii lafa ilaalchisee Xiyyeefannaan kannamuu fi Sekatta’u C. Dhiheessa fi Misooma lafa magaalaa ilaalchisee D. Beenyaan lafa magaalaa fi qabeenyaa xiyyeefannaan kennamuu. E. Humna Raawwachisaa Misoomaa fi bulchiinsa lafaa dabalatee armaan olii irratti xiyyeefannaan kennamu fi isaa Sakatta’uudhaan gurmaa’insa garanaan jiru cimsuu fi Uumu. Gama 2 Hojii Misoomaa fi Bul/Lafaa akkasumaattis hojiin Tajaajila lafaa fi galmeessan lafaa namoota beekkumsa fi dandeetti gahaa qabanin akkasumas ilaalcha sirrii qabeniin ni hogganama. Hojiilee Hojjataman - Dhimmoota Misooma fi Bul/ Lafaatiin walqabatan akkasumattis galmeessan lafaa fi Qabeenya lafaatiin wal qabaten irratti Sagantaan leenjii dhaabbata bara baraan lafa kaayyachuu. - Maanuwaalota leenjii qopheeffachun fi Leenjii Kennun. - Leenjii dandeetti cimsuuf kenamu cinatti rakkoo ilaalchaa fi naamusaa hoojattoota Tajaajila kana kennan furuudhaaf leenjii gaggabaabaa itti fufinnsa qabu kennuu. - Raawwii Leenjii gamagama bu’aa isaa galmeessuu. - Tajaajila misoomaa fu Bul/Lafaa hojmaata lafaa fi Qabeenya lafatiin wal-qabate tilmaamni isaa akkaataa itti ba’u irratti waltajjii hubannoo hawaasaa ittiin cimsan qaphessuudhaan hawaasni mirgaa isaatiif falmatu akka jiraatu godhuu. Kaayyoo - Mana marii magaalaa fi Araddaa Cimsuudhaan haala qabatamaa magaalaa teenyaatin tumaalee adda addaa baasuu dhaan misooma magaalaa akka saffisiisu godhuu.
Galma 1 Tumaaleen adda addaa 2 mana mariitiif dhiyaatanii ni mirkanaa’a.
Hojii Hojjatamu - Muuxannoo Magaaloota biro fudhachuu - Haala qabatama magaalaa teenyaatiin wixineelee adda addaa qopheessuun qaamni seeraa akka irratti mari’atan godhuu. Galma 2 - Koreewwaan dhaabbi Manneen marii magaalaa Raawwii hojii wajjiraa waggatti marsaa 4 gabaasa dhiheessuun ni qoratan Hojiilee Hojjatamu qaban - Korii dhaabbii mana marii Araddaafi magaalaa waliin Walitti dhiheenyaan hojjachuun Sagantaa dhaabbii tare lafa kaayyachuu - Koree dhaabbii mana mariitiifi leenjii kennuu.
Karoora Lafa Tajaajila Hawaasummaaf oolu kan bara 2003 Lakk Gosa hojii Safartuu Karoora Waggaa 10,000 500 500 8000 5000 1000 5000 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Beenyaa shalaguu 125 125 2000 1250 250 1250 125 125 2000 1250 250 1250 125 125 2000 1250 250 1250 125 125 2000 1250 250 1250 Waggaa guutuu Waggaa guutuu Waggaa guutuu Waggaa guutuu Waggaa guutuu 4 5 6 7 Iddoo buufata M2 M2
Ibsa Kur 3ffaa Kur 4ffaa
Iddoo galmi itti M2 ijaaruu Araddaa 01 Araddaa 02 M M
konkolaataa Iddoo gabayaa Iddoo IMX Iddoo goggogaan gatamu qopheessuu Kollejii Musillima
oomishaa M kosiin M itti
Karoora Lafa Investmentii bara 2003
Lakk Hojii Karoorfame Safartuu Karoora waggaa Yeroo Raawwii Ibsa
1 Tajaajilaag 2 Daldalaaf 3 Oomishaa 4 Bashannanaaf 5 Lafa mana jireenyaaf Ida’ama
5000 3000 6000 500 5000 15,000
125 750 1,500 125 1,250 3,750
Karoora Qophii Lafa mana Jireenyaa
Lakk Hojii Karoorfame 1 Jiraataa Magaalaa 2 Qoteebulaa Naannootiif 3 Namoota biyya Alaatiif 4 Konneen birootiif 5 Ida’ama Safartuu M2 M2 M2 M2 M2 Karoora waggaa 20,000 10,000 1000 31,000 62,000 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Kur 2ffaa 500 2,500 250 7,750 15,500 500 2,500 250 7,750 15,500 Ibsa Kur 3ffaa 500 2,500 250 7,750 15,500 Kur 4ffaa 500 2,500 250 7,750 15,500
Kutaa IV 4. Hojiiwwan Birroo 4.1. Tajaajila Hawaasumaa
Kaayyoo:- Akkaata JBAH Qoratameen kenna Tajajilaa Galma 1 Hojii Hojjatamu - Ragaa bu’uraa jiraattoota Sassaabuu, galmeessuu fi qindeessu. - Ragaa Jiraattoota magaalaa (IT) qindeessu. - Faayidaa ragaan bu’uraa jiraattootaa sassaabuu fi galmeessuun qabu irratti bara cimsu kannuu. - Jijjirama ragaalee buraa barbarian galmeessan deemuu - Ragaalee adda addaa maxxansuu - Waraqaa Eenyummaa - Ragaa dhalootaa - Ragaa gaa’eelarraa bilsaa - Ragaa hiikaa - Ragaa Du’aa - Galmee Tajaajila ragaa kabajaa fi Eenymaa Jiraattoota qopheessu. Galma 2 Hojii Tajaajila Ittisa balaa Ibiddaatiif Namni ramadame qophiin Ittisa balaa Ibiddaa godhamuun xiyyeefannaan kannamu ni Jalqaba. Hojii Hojatamu ni Jalqaba.  Iddoo yoo ibiddi ka’e konkolaatan hin seenne adda baasuu.  Qabeenyaa kararra Jiru adda baasuu.  Hawaasa mari’achiisuun karaa banuu.  Iddoo konkolaataan bishaan irraa guutatu qopheessu.  Keemikaaloota adda addaa bifuu - CO2 - Foam - Keemikaala adda addaa Galma 3 Iddoon Awwaalchaa qophaa’e beenyaan shalagame kafalame boolli awwaalchaa dursa qophaa’e taa’u ni jal qaba.
Hojii Hojjatamu.  Akkaata Maastar pilaanii Iddoo awwalaa adda baasuun beenyaa shalaguun qopheessu  Boolla Awwaalchaa qopheessuu  Meeshaalee Awwalchaaf barbaachisu kafana Qopheessuu………  Sirna Awwaalcha Raawwachu------Lafaratti Galma dabalamu qabu______________ Galma 1 Bulchiisii magaalaa keenyaa keessatti sirni Bulchiinsa lafaa Bulura sirna liiqii irratti hundaa’e hojiirra ni oola. Hojii hojjatamu  Ilaalcha dogongoraa fi hanqina hubannoo hawaasaa fi hojjattoota bira jiru qulqulleessuuf Leenjii kannuu fi hubannoo walii gala uumuu.  Lafa Liiqiin fudhatamtee irratti yeroo jarmeeynii itti eegalmuu fi Itti Xummuramu akkasumas kafaltii Liiqii kan duraa adda baasuun kallatti kaayame qofan hojjachuu.  Lafa Investimantii waa hundarraa qulqulleessuun saayit pilaana kaasuun caalbaasiin dhiheessu.  Istandardii gatii ka’oomsa Liiqii maanuwaaloota hojamaata Liiqii bahe nuuf ergame hojiira OOlchuu  Lafa kannamu sirna Liiqii qofaan akka tahu godhuu.
Karoora gara hawaasummatiin Bara 2003 karoorfame Lakk Hojii Karoorfame 1 2 3 4 Safartuu Karoora waggaa 120 400 40 3,000 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Kur 2ffaa 30 30 100 10 25,000 100 10 25,000 Ibsa Kur 3ffaa 30 100 10 25,000 Kur 4ffaa 30 100 10 25,000
Ifaa karaa fi Bawzaalee bade Lakk suphuu Ragaa dhaloota, fuudhaa fi Lakk heerumaa, du’aa kennuu Awwaalcha rakkataa Lakk Daa’imman lafaa argaman Qarshii hamma guddiftuu argatutti maallaqaan deeggaruu. Namoota rakkoo adda addaa Nama qaban gargaaruu Duula HIV /AIDS Lakk
20 4 40 22
5 1 100 22
5 1 100 -
qindeessuuf fi deeggaruu. Kitaaba bituu Lakk Kilabii kubbaa millaa akka Namaa hundaa’u fi baajatni qabamuuf godhuu
4.2. Hojii Qulqullinaa fi Magariisuu magaalaa Kaayyoo walii galaa Humna raawwachiisummaa keenyaa cimsuun Adeemsa hojii haaraya JBAHn qoratame hojiirra oolchuun hanqina qulqullinaa fi magariisuu magaalaa wal qabatee jiru fooyyeessuudhaan qulqullinni magaalaa fi fayyaan hawaasaa akka eeggamu taasisuu. Kaayyoo 1 Akkaataa JBAHn qoratameen fedhii maammiltootaa fi qooda fudhattoota qulqullinaa fi magariisuu magaalaa qorachuun karoora qopheessuu fi humna namaa guuttachuudhaan Tajaajila fooyyeen akka kennamu gudhuu.
Galma 1 Akkaataa JBAHn qoratameen hojii keessa galuudhaan hanqinoota jiran dhawaataan fooyyeessaa deemuun tajaajilli maammiltootaa fi qooda fudhattootni irraa gammadan ni kennama. Hojii Hojjatamu - Fedhii qulqullinaa qorachuun addaan baasuu - Fedhii irratti hundaa’uun karoora qopheessuu - Humna namaa fi meeshaalee barbaachisan addaan baasuun guutuu - Karoora yeroo yeroon fooyyeessuu - Gabaasa Raawwii hojii yeroo yeroon qopheessuun qaama barbaachisuuf erguu Kaayyoo 2 Sadarkaa dhaabbataa fi manaatti faalama Naannoo to’achuu kan danda’u humni namaa gurmaa’insa, seera, danbii fi tumaan akka jiraatuuf karaa cimina qabuun akka hojiirra oolu godhuun humna adeemsichaa dhawaataan cimaa deemuu fi gahaa tahee akka jiraatu godhuu. Galma 2 Paakeejiin Ekestenshinii fayyaa hojiirra ni oola.
Hojii Hojjatamu - Humna namaa akkaataa qajeelfamaatiin magaalaa teenyaf barbaachisan addaan baafachuu - Humna namaa bara baraan filuun leenjiif erguu - Akkaataa qajeelfamaatiin qaxanaa (wiirtuu) addaan baasuun ramaddii gaggeessuu. - Paakeejii ekestenshinii fayyaa akka hojiirra oolan hordofuu, deeggaruu fi to’achuu Galma 3 Kosiin guyya guyyaan magaalaa keessatti bu’u % 70 guyya guyyaan ni kaafama. Hojii Hojjatamu - Bo’oo lolaan guyyaa guyyaan qulqulleessuu fi konkolaataan iddoo qophaawetti gatuu - Daandii fi qarqara isaa, iddoo waltajjii adda addaa. iddoo gabayaa guyya guyyaan qulqulleessuu - Sagantaa konkolaataan gandarra deemee balfa (kosii) kuufame kaasu qopheessuun hojiirra oolchuu. - Iddoo balfi itti gatamu qopheessuu - Balfa deebi’ee hojiirra oolu addaan baasuu - Interpiraayizota qulqullinaa ijaaruudhaan balfa deebisanii hojii irra akka oolu godhuudhaan bobeessaa fi xaa’oo uumamaa qopheessuu - Deeggarsa dhaabbilee adda addaa gaafachuu Galma 4 Biqiltuu iddoo adda addaarraa fiduun hawaasaaf firiin 20,000 ni raabsama Hojii Hojjatamu - Dhaabbii fi namoota dhunfaa hojii kanarratti bobba’an deeggaruu - Interpiraayizota IMX hojii kanarratti bobba’an deeggaruu - Biqiltuu hawaasaaf hiruun akka dhaabbamee kunuunfamu godhuu. - Hawaasaaf biqiltuu 20,000 raabsuu - Daandii walakkaa fi maddii 1km meexii dhaabuu - Iddoowwan waltajjii lama ijaaruu kunuunsuu - Hubannoo hawaasaa cimsuun beyladaa gara magaalaatti gadi dhiisuu akka dhiisaniifi manatti akka eegan godhuu.
Galma 5 Abbootii qabeenyaa, Bulchinsi Magaalaa fi ummataa kosii goggogaa kaasuu fi ittisuu irratti gaheen isaanii addaan bahee akka beekkamuufi qindoominaan hojjachuu kan dandeessisu sirni hojimaataa ni diriira. Hojii Hojjatamu. - Haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin labsii, danbii fi qajeelfamootarratti hundaa’uudhaan tumaa gahee hojii abbootii qabeenyaa, bulchinsaatiifi ummataa addaan baasee kaayu wixinee isaa qopheessuu - Wixinee isaa irratti ogeeyyota adda addaa mari’achiisuun fooyyeessuu. - Wixinee fooyya’e irratti umata mari’achiisuu. - Wixinee fooyya’e irratti mari’atamee mana mmana maritiin mirkaneessuu - Wixinee mirkanaa’e akka hojiirra oolu godhuu deeggaruu fi hordofuu Galma 6 Sirni kosii magaalaa keessa ba’u deebi’ee hojiirra oolu ni diriira. Hojii Hojjatamu - Iddoo qushaasha magaalaa keessa guuramee itti naqamee xaa’oon uumamaa itti qophaawu danda’u qopheessuu - IMX kosii magaalaa keessa bahu deebi’ee bobeessaa fi xaa’oo uumamaa irratti bobba’an jaaruu - Namoota hojii kanarratti bobba’anii jiran addaan baasuun deeggaruu - Dhaabbiilee Mootummaa fi miti Mootummaa dhimma kanarratti mariisisuun deeggarsa akka godhan gaafachuu fi qindoominaan hojjachuu. Galma 7 Sirni to’annoo qulqullina jaarmayaalee fi dhaabbilee akkasumas hojiin to’annoo qulqullina magaalaa keessa guyya guyyaan itti gaggeeffamu diriiree hojiirra ooluu ni jalqaba.
Hojiilee hojjatamu - Haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin caasaa qulqullinaa fi magariisuu magaalaa akka fooyya’u qaama olaanuuf dhiheessuun akka fooyya’u taasisuu - Haala qabatamaa magaalaa teenyaatiin labsii, danbii fi qajeelfama Mootummaan bahe irratti hundaa’uun wixinee to’annoo qulqullinaa lafa kaawuu - Ogeeyyota adda addaa irratti mari’achiisuun fooyyeessuu - Kan ummatni irratti mari’ate yaadaa ummataatiin gabbisuudhaan mana mariitiin mirkaneessuu - Danbii, Qajeelfamootaa fi tumaan bahan kallattii JBAHn Qoratame qofaan hojiirra akka oolu, godhuu, hordofuu, deeggaruu fi hanqinoota jiran sirreessaa deemuu. - Abbootii warraa 25,000 ekestenshinii fayyaatiin akka hammataman godhuu - Danbiin qulqullinaa MNO baasee hojjattoota ekestenshinii fayyaatiin akka hojiirra oolu waajjira fayyaa wajjiin qindoominaan hojjachuu
5. Hordoffi; Gamaagamafi Rakkoolee Mudachuu Malanii fi yadaa furmataa karoora Bara 2003.
Kaayyoo Waliigala Karoora qophaa’e hojiira oolchuu keessatti haala itti raawwatamaa jiruu fi sadarkaa inni irra jiru addaan baasanii beekuudhaan hanqina jiru battalumatti sirreessuun fuula dura akka hin deebine godhuudhaan ciminni jiru akka baballatu godhaa deemuu.
Hojiin karoora kana keessatti ammataman addaan baasuun Adeemsoota hojii hundaaf erga qoodame, adeemsoonni hojii hundi kaayyoo fig alma isaanii lafa kaayyachuun rawwattootaa wajjiin irratti mari’achuun hojii Isaanii guyya guyyaan akkasumas Torbaaniin gabaasa qopheeffachuun Raawwiin Torbaaniin kan qoratamu taha. karaa birratiin checklistiin Ji’aan kaname raawwii isaa madaaluun kaname raawwii isaa madaaluun duubleebiin kan kanamee taha. marii Torbaanii fi Ji’aan gaggeefamu irratti hundaa’uun rakkoolee qunamaniif furmaanni kannamaa akka deemanu godhama.
Karoorri Wagga qophaa’ee kan kurmaanaan adda bahe kan qophaa’u yommuu tahu karoora kurmaana kana irraa mgmt, koree waliigalaan kasaa biraatiin dhama kurmaana Kurmanan raawwiin koree dhaabbii fi mana mariif dhihaate ni madaalama. 5.3 Rakkoolee Mudachuu danda’an - Hirmannaan ummata xiqqaachuu fi gochi seeran alaa bobal’achu - Seektaroonni waltti hidhamiinsa hojii qabnu gaamooleen akkasumas abboottiin qabeenya gahee ofii addaan baafatanii beekanii Raawwachuu Caalaa ilaalcha eegatummaatiin sakaalamani mana Qopheessaa komachuu. - Hojjattoonni seektaraa gahee ofii sirritti beekuudhabuu Dambii fi Labsii akkasumas maanuuwaalii hojii JBAH sirritti beekuu dhabuu fi kallatti saniin Raawwachuu Dhabuu.
- Waltajiin idilee kabajamuu dhabuu, madaalliin hojii kanname safaramu dhabuu irraa kan ka’e kan hojjituu fi kan hojii xiqqaachuu - Ilaalcha kiraasassaabummaan sakaalamu, fedhii faaydaa ummataa halkanni – guyyaa hojjachu caalaa boqonnaa barbaadu, hojii ofii beekanii karoorfatanii hojjachuu caala hojuma xixxiqqoo guyya guyyaan dhuffu hojjachu. 5.4 Yaadaa furmataa - Olala soba mormitooni ofaniin sadarkaa duraatti kan miidhamu irraattoota magaala teenya tahu ummanni akka hubatu waltajii marii bal’inaan uumuun olala sobaa saaxilaa deemuu. - Hojiilee hojjachuuf karoorfaman hunda addaan isaa beekee akka bahu walitti dhiheenyaan hojachuu. - Labsii danbii fi Qajeelfamoota seektara magaala ilaallatan akkasumas maanuuwaaloota JBAH Irratti leenjii kannuun hubannoo gaama adda addaa cimsuu. - Adeemsoonni hojii hundi karoora of danda’e akka baafatan deegarun osoo karoora hin baafatin hojiin hojjatamu akka hin jirre beekanii karoora akka baafatan godhuun Raawii isaa gamaagama deemuu. - Cheeklistii Ji’aa Ja’aa kannuun madaala deemuun hanqina Jiru sirreessaa deemuuf kanneen cimina qaban Jiru sirreessaa deemuu. 6. Sirna Gabaassa - Gabaasni torbaanii adeemsoota hojii hunda koree Mgmt Irratti dhihaate ni qoratama - Gabaasini Ji’aa eega koree mgmt qoratame booda QHMM Godinaaf, Koree waliigalaaf ni dhihaata. - Gabaasni kurmaana fi waggaa galma karoora waggaa fi ji’a jahaa irraatti kaa’ame waliin madaaluun milkaa’uu fi milkaa’u dhaabuu isaa sababa waajjin madaalli ifa taheen koree mgmt ni kaayyama. - Karoorri Kurmaana fi kan waggaa Waajjiira Afyaa’iif ni dhihaata, Qaama qodinaa fi biroof ni ergama.
Gabatee Piroojaktii bara 2002 eegalamanii osoo hin xumuramin gara bara 2003 dabruu dandayan agarsiisu Lakk Gosa piroojaktii Karoora bara 2002 Faay 912,387.60 864,601.78 2,000,000 803,325.41 158,874.80 180,000 4919189.5 9 Raawwii bara 2002 Fiz 20% 20% 20% 20% 50% -Faay 182,477.52 172,920.4 400,000 160,665.1 79,437.40 -8859803.02 Hojii gara bara 2003 dabru Fiz 80% 80% 80% 80% 50% 100% Faay 729,910.08 691,681.42 1,600,000 642,660.31 79,437.40 325,000 4068689.21
Fiz ffaa Mana B/Sad 1 100% Magaalaa Jimaa 100% Jiddugala dargaggoo 100% Buufata Fayyaa 100 Sheedii IMX 100% Ifaa Ganda Diddiimtuu 100% harkisuu Ida’amaa 100%
karoora Piroojaktii bara 2003 karoorfame
Karoora Waggaa Kur 1ffaa Fiz Faay
Kur 1ffaa Fiz Faay
Kur 2ffaa Fiz Faay
Kur 3ffaa Fiz Faay
Galma walgahii jaaruu Karaa 2.1karaa haaraya banuu 2.2 karaa suphuu 2.3 karaa koobilistoonii
Lakk km km km
1 5 10 0.6 2
1,300,000 50,000 100,000 300,000 50,000 450,000 300,000 15,000 75,000 25,000 50,000 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 25000 75000 25000 112500 75000 7,500 18750 6250 12500
15% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% 25%
195,00 25000 75000 25000 112500 75000 7,500 18750 6250 12500
15% 50% 25% 25%
195,00 25,000 25000 75000
30% 50% 25% 25%
290,00 25,000 25000 75000
2.4 dizaayinii karaa jijjiirraa km 3 qopheessuu Booyii fi riqicha 3.1 Booyii 3.2 Riqicha Mana fincaanii ummataa Boonoo bishaanii Iddoo bishaan ibidda irraa dhaamsuuf 7 8 waraabbatan Lakk Lakk jaaruu Sheedii Magaalaa Dalaya M/B/Sed 1ffaa 2km 3km Lakk Lakk Lakk
112500 75000 18750 6250 12500
11250 0 75000 18750 6250 12500
Karoora leenjii fi marii gaama Hawaasaa adda addaa wajjiin gaggeessuuf bara 2003 keessa
Lakk Mata duree Qaama marii mari’atu 1
Karoora Waggaa Dh Dha W/g i Raawwii Jiraattota 58 280 810 karoora magaalaa 0 1998-2002 Mana Marii 150 300 fi wixinee Magaalaa 15 karoora Mana M/Ara 0 80 280 2003-2007 Dargaggoota 20 0 Karoora Jiraata Mag 32 175 500 bara 2003 Hojjataa 5 18 40 Mot 22 Konferensii Jiraataa 53 280 810 ummataa Magaalaa 0
Kur 1ffaa Dh Dha i 14 70 5
Kur 2ffaa W/g Dhi Dha 215 145 70
Kur 3ffaa W/g Dhi Dha 215 145 70
Kur 4ffaa W/g Dhi Dha 215 145 70
Ibsa W/g 215
Kurmaana 1ffaa qofa hojjatama
Karoora Waggaa Adeemsa Hojii gama Qulqullinaa fi Magariisuu Magaalaa lak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hojiilee karoorfaman Safartuu Karroora waggaa 1 1080 360 720 800 1 180 12 Karroora Karroora Qaama kurmaana ji’aa raawwatu 90 180 180 800 30 60 60 Akkamitti akka raawwatu Ibsaa
Sirna koosin wirtuulee irra itti kaafamu diriirsuu Lakk Koosii magaala jimaa kaasuu Piyaajoo Qalma seeran alaa ittisuu fi tarkanfi sirreessa Guyyaan fudhachuu Koosii magaala jima alaa kaasuu Booyii qulqulleessuun Booyii cufame banuu Sirnaa koosiin deebi’e hojiirra Piyaajoo M2 M2 oluu Lakk
diriirsu(recycling) Koosii dhaangala’a kaasuu Piyaajoo Sirna kosiin itti qabamu fi kaafamu irratti warraa Lakk mana isaanitti jimaan cabu fi biitammu wajjiin marii gaggeessuu Warra ra’ee
magaalatti gad lakkisan akkaata Lakk fi dhaabbilee Lakk
qajeelfamaatin sirressuu. To’annoo qulqullina jarmiyaalee gaggeessu.
lak 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Karroora waggaa 360 12 2400 360 360 4 6 360
Karroora Karroora Qaama kurmaana ji’aa raawwatu 90 3 600 90 90 1 90 30 1 200 30 30 30
Akkamitti akka raawwatu
Konkoolata daandii gubatti dhaqamuu ittisuu Guyyaa Boolla cumun guutee baasuu fi hordofu Lakk Iddoo biqiltun itti dhaabamu haala sadarka isaa Boollo eeggateen qopheessuu. Qulqullina naanawa qeeyira to’achuu fi hordofu. To’anno hojjetoota qulqullina gaggeessuu Duula qulqullina gaggeessuu Boolla koosiin itti gatamuu qopheessuu Dandii fi qarqara isaa, waal tajjii adda adda, iddoo Guyyaa Guyyaa Lakk Boolla Guyyaa
gaba guyyaa guyyaan qulqulleessu. Kafaltii hojjetoota guyyaa haala mijeessuu Lakk Marii guyyaa guyyaa gaggeessuu Guyyaa Biqiltun gosa adda adda fiduun raabsuu, dhaabu fi lakk kunuunsuu
Misooma Mana irratti hojii bara 2003 karoorfame Lakk Hojii Karoorfame 1 Safartuu Karoora waggaa 40 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Kur 2ffaa 10 10 Ibsa Kur 3ffaa 10 Kur 4ffaa 10
Manneen master pilaanii Mana magaalaatiin walsiman hojii
regulariayizeeshinitiin seera qubsiisuu fi kaadistara hojjachu. Manneen seera qabatan addaan baasuun lakkoofsa mana kennuu Manneen Araddaa J/gala gabaa jiran addaan baasuun shalaggii isaanii hojjachuun invastimantiif qopheessu. Ulaagaa calallii namoota rakkoo mana jireenyaa qabanii qopheessuun mirkaneessuu Abbootii mana Araddaa waliin walii galtee guutu Karaan mana Araddaa yeroon akka sassaabamu hordofuu
Lakk Lakk Lakk
Hojii Ijoo Hoggansaa Lakk Hojii Karoorfame 1 2 Safartuu Karoora waggaa 200 5 Yeroo Raawwii Kur 1ffaa Kur 2ffaa 50 1 50 1 Ibsa Kur 3 50 1
Kur 4 50 2
Adda duree horachuu Lakk Abboti Adeemsaa adda duree Lakk
ta’an Badhasuu 3 4 5 6 7 8 Gabaa Torbaanii Koree mgt Lakk qorachuu Gabaasa Ji’aa koree Dhaabiin Lakk qorachuu Karoora kurmaanaa Lakk 48 12 4 48 12 6 12 3 1 12 3 2 12 3 1 12 3 2 12 3 1 12 3 2 12 3 1 12 3 -
qopheessuu Koree Mngt irratti hirmaachuu Lakk Hojii hoggansaa hundaa Lakk hojjachuu Humna namaa akka guuttamu Lakk godhuu
Karoora Meeshaalee Karoora Meeshalee dhaabbataa kan bara 2003 keessaa Mana hojiitiif guutamuu qaban
Safartuu Baayina Lakk Gosa Meeshaalee Gatii tokko Gatii waliigala Qar. sa Qar. Sa. Yaad a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28
Minjaalaa Kompitara Kursii Nannofatuu Kursii xiqqaa dhimmaa Pirintara (HP Laser
Lakk Lakk Lakk abba Lakk jet Lakk Lakk Lakk Lakk Lakk Lakk
12 5 12 6 5 15 2 7 2 10 3 15 10 10 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
1320) Urtuu waraqaa xiqqaa Taayipii Shelfii xixiqqaa Lap Top Komutar Daawwiti Komputara Sa’aa Gidaaraa Buqqiftuu Ispili Paper Tray Baldii qushaashaa Margachaa Footoo koopii xiqqaa (Baay’istuu TV Pirojaktarii Kameeraa dijitaala Vidio dijitaalaa Meesha sagale warabu (soby) Tootal Isteeshin GIS Motor cycle Hyndaa Micro phona guddaa CD recorder Mikiraafoona Computaraa Kaaseta VCD Memory Vidio kamera Kaseta video guddaa
Lakk Lakk Lakk Lakk Lakk
Lakk Lakk Lakk Lakk
Meeshaa Bara Bajetaa 2003 kan nu barbaachisu Meesha dhumatifi dhabbi (BQHN)
Safartuu Baayina Lakk Gosa Meeshaalee Gatii tokko Gatii waliigala Qar. s Qar. Sa. a Yaad a
Qalama Bikki cuqulissaa Qalamaa Bikki Diimaa Sarartuu pilastikaa guddaa Fludii U’huu Stamp pad Fastinara Qalama chappaa Ispiil Doosee Furdaa Qalama gogoggaa (Irsasaa) Ajandda 2003 Warqaa foto kopii Air firsh Karboni 8000 Not-Book jiddu gala Not- Bookii xixiqqaa Jerkana Bishanii Huccuu kafanaa Xalayaa sarar Galmee guddaa Xalayaa Iskewer Qalama printara Qalama Copy center 255
Paki Paki Darz Darz Darz Darz Darz Lakk Darz Darz Darz Lakk Darz Lakk Darz
30 15 2 5 20 10 20 15 10 20 5 45 60 10 6 40 40 5 2 5 10 2 15 2
Lakk Lakk Mara a Darz Lakk